Tinofanira Kutama On? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndinoziva pane vakawanda vanonetseka nei chokuita nomuedzo uyu akabatwa pfungwa dzakawanda. Vamwe vanonetseka kuti nei vamwe vatema vabereki ndivo saka anokurumidza tsitsi Trayvon Martin, pasinei nokuti akanga nyaya yake. Shure kwezvose, hapana wedu vakanga uye hatizivi chaizvo zvakaitika. Nepo chiri chokwadi, Handina kuwana ndiri mupfungwa paakapiwa wose mutsekwende. Ini handigoni kutaura kuti munhu wose, asi ndinogona kukuudza nei ndakazviwana vanonzwira tsitsi Trayvon uye mhuri Martin.
Pandinonzwa pamusoro wechiduku kuyaruka dema achifamba kumba kubva kuchitoro, uye murume rakatora aiva mutadzi asati achiziva chinhu nezvake, Ndinogona kurondedzera. Ungasakwanisa kukwanisa. Pamwe awaisambova kare vachitevera kumativi ari dhipatimendi chitoro kuburikidza murindi akachengeteka pasina chikonzero. ndine. Pamwe awaisambova mukana chitoro wezvokukurukurirana achizhamba kwamuri kuenda, vachifungidzira kuti Blackberry uri hudyu ndiwo pfuti rwaunoda kupfura naye. ndine.
Pamwe awaisambova vakanyemwerera akakwazisa vanhu wakambotamba vakapfuura mumugwagwa, chete kuti kwavari vadzivise ziso kuonana, batira zvavo, uye nokukurumidza famba kure. ndine. Pamwe awaisambova Vakawisirwa pamadziro, yakaitirwa pfuti, uye handcuffed nemapurisa (vari vakafunga kukudzivirira) nokuti imi "tarira sezvinoita fungira Takatarira.” ndine (ndikatarira chinhu sezvizvi fungira). All zviitiko izvi zviduku uye hapana yekudyidzana pangozi upenyu hwangu. Most, kana kwete zvose, shamwari dzangu vatema vave kuburikidza ezvinhu akafanana. Uye vamwe vasingaverengeki vakatsungirira zvikuru, zviipe.
Kana wakambotamba kumboita chinhu chorudzi urwu, iwe angasanzwisisa nei ichi nyaya resonates zvikuru nesu. Asi kana ini kunzwa nyaya yake, Ndinonzwa nyaya yangu. Uye nyaya baba vangu. Uye nyaya mwanakomana wangu. Handina pfungwa chii chakaitika pashure Mr. Zimmerman akaita zvekungofungira pamusoro kuti jaya, asi pamberi akatadza kuwirirana, paiva pasina zvinoshamisa pamusoro chiitiko. Zvinoitika ose chete zuva.
Vafambi ndiko chaiko, uye kazhinji kwemarudzi. Vamwe vanhu vanofunga kuti vane chipo kuziva hunhu chete nokutarira munhu. Sezvinoita rebhuruu rima yunifomu uye bheji zvinoreva vatevedzere mutemo, ganda rima uye Hoodie zvinoreva lawbreaker. No kukurukura chaitika, asi yokufungidzira Rap papepa wanamatira. hunhu chisimba Vanzveri. Vanofunga pamusoro chenhubu mufananidzo vakaona paTV, kana ngozi vabereki vavo akavaudza pamusoro, kana chinosemesa mhosva vakapupurira - uye vanoisa zvose kuti mukwende pamunhu havana kumbobvira kunyange akasangana. Hatina kumbobvira kodzero kuzochera kusina kumukodzera mhedziso pamusoro person- kunyange kana kutendeuka kuti ichinetseka.
Kupira uku zvekungofungira anosemesa uye venhema. Mwari akaita vanhu vose vari nomufananidzo wake pamwe ukoshi uye kukosha. Asi tose tinotadza uye vanokundikana kuratidza mufananidzo waMwari tinofanira. Mumwe nomumwe wedu anogona kutsauka pazvivi zvedu, kuvimba Kristu, uye kuitwa kodzero noMusiki wedu. Asi kusarurana mapiki uye anosarudza iyo vanhu chokwadi ava vanofanira kushandiswa. rusaruraganda inoti, "Ndine zvinokosha uye zvakanaka, uye vanhu vose ivavo vakaipa.”
Izvi nokuzvikudza kupandukira Mwari uye kushorwa Evhangeri yake tichifanira kufarira vanhu vaMwari. Tinofanira kuiteerera, uye hatifaniri kutya kutaura izvozvo. The Good News ndechokuti Jesu akauya kufira zvose musaruraganda uye vasiri musaruraganda vatadzi. Vaichimbova vavengi vanogona kuva shamwari maari, uye kubatsirwa chaiwo renyasha. Ndianiko achaita tawedzera, nyaya iyi, uye kuzivisa chokwadi? Kana uchifunga makwikwi chakaita iyi, haugoni kuramba kuti rudzi chinhu chinokonzera muupenyu zvokuti vazhinji vedu ose zuva.
Chii chatinoita Now?
Saka tinofanira kuita sei? Pamwe tinofanira kupfuurira mupfungwa imwe. Pamwe tinofanira kurega kuvabvunzeiko penhumbi isu hauna chokwadi pamusoro. Hatizivi zvose chete zvakadzama kuti usiku; zvikasadaro tingadai makadanirwa zvapupu. Uye kunyange kana kwete isu kuita mutongo, zviri mumaoko edu.
Pamwe tinofanira kurega nharo, uye kutanga kunyengetera. Nyengeterera mhuri. Nyengeterai kuti Mwari aizochengeta vimbiso yake kutumira Mwanakomana wake kuti auye kururamisira kwakakwana. Ishe haadi magweta nharo nyaya yavo, uye Iye hakudi uchapupu vakaisawo. Iye haritsvaki jurors kupa kwaari maonero avo. Anoona zvose, anoziva zvose, uye vatongi nokururamisira kwakakwana.
Asi imwe pfungwa, isu dzemunguva hazvifaniri mberi. Hatifaniri kurega kutaura pamusoro rusaruraganda kuti achiri Anovandira munyika yedu. Kana WAKUNZWA, kubatsira vaya vasina ruzivo kuti kunzwisisa. Shivirira neshamwari dzako sezvavakanga clumsily kutsvaka kunzwisisa zvaunenge waita vagura. Uye regai ndivaidze zvakanaka nokuita kunaka pfungwa. Trust Kristu, munyengetere Mwari aizoita kuumba hunhu wako kutarisa zvikuru kufanana Yake.
Kana kumbova nezuva kugamuchira kuguma rusaruraganda, kunzwira tsitsi vaya vane. Dzidza pamusoro pezvakaitika. Haugoni kuda munhu kana ukasateerera kana rerutsa zvinovanetsa. Tapota kumbofa vakafungidzira kuti vanhu vari chete vachinyunyuta uye vachiridza "nhangemutange kadhi.” Tsvaka kunzwisisa navo, uye remekedza chokwadi kuti vamwe vedu kugara zvakasiyana chaizvo uye kutsungirira miedzo yakasiyana.
Zvose zvamunoita, chete regai chinyarara nezvazvo.
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:09 ndiri • pindura
T.L., Ndine urombo kuti wanga kuburikidza vamwe ine zvinhu, asi kunyanya nyaya iyi kwakanga kusiri kuratidzwa rusaruraganda mu America. George akanga asina kunyange nechokwadi Trayvon kuti rudzi kusvikira gare gare 911 kufona, apo Trayvon akatanga kufamba akananga mirayiridzo yake. Trayvon aionekwa sezvo kunyumwa nokuti isu akanga achifamba pakati uye shure nezvivakwa furati, Akaonekwa kuti makatarira mahwindo. yeuka, munharaunda iyi akava tambo yokumbozorora-dzi uye burglaries. Ndokusaka Trayvon akatarisa fungidzira. Akanga achifamba nomugwagwa muchiedza dzomunzvimbo mumigwagwa-marambi, George ndisina batted ziso.
Ndinonzwa anotyisa kuti jaya akafa; asi ndinonzwa kunyanya zvinotyisa zvose kuti atevera somugumisiro iyi kuitwa ishiri ive paanotaura rusaruraganda. Five dema vachiri kuyaruka vari Baltimore vakaita Hispanic murume aine pfuti zuro vakamurova “nokuti Trayvon.” LAPD vave kuita mhirizhonga diki kubvira aisava nemhosva vakauya. Ichi rusaruraganda nyepera anonyangadza, uye zviri kukuvadza vanhu, kwete vachivabatsira.
Chii inonditambudza ari kuti zvinhu izvi hazvirevi chete kuitika vanhu vatema. Ndaibatwa chaizvo zvakaipisisa dzangu nevezera nhema chikoro pakati. Apingirishwa pasi bleachers, kutyisidzirwa, uye kusekwa. Mashoma ago Ndakashanyira ane pakoreji kembasi zvose-dema-vanhurume apo ndakanga achizvipira nokuda Black Girls Code. Kungoedza kufamba kuti motokari yangu ndakanga akasangana nokunyombwa uye kutyisidzirwa kukoreji vakomana vasina kufunga I zvaiva pamusoro kembasi yavo.
Amai mashoma ago muno Georgia akavingwa 17 egore uye 14 egore (zvakare, zvose dema) panguva 9am uyo akapfura kwake gumbo, uye wake 13 mwedzi yekare mwana kumeso. Izvozvo nei vanhu vhundutsa dzimwe nguva. Kungava mbatya? Kungava kuti hip tsika kuti freaks vanhu kubva? dzimwe nguva. (Sad kana zvechokwadi, asi anonzwisisika).
Chero nyaya iri, Ndinovimba munyengeterere yokugadzirisa kuti zvichaita inotibatsira kuponesa upenyu nevana vedu vaduku, pasinei nedzinza ravo. Ndine urombo zvakare kuti wanga kuburikidza vamwe pazvainge, asi kuita izvi Trayvon / Zimmerman nyaya pamusoro nhangemutange asingadi kubatsira kunzwisisa kwedu, izvozvo kwaita izvozvo.
YOURSTRULY • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:10 ndiri • pindura
Excellent pfungwa uye tsime akaisa. Rusaruraganda yave transitioned uye rava rose chinhu chitsva “vafambi” uye zvinoitika pakati vanhu vanozviti kuva akasiyana. The Guy mune sutu uye musikana ari rukanda etc.… vafambi yose kumativi uye zvakaoma kuti vabve, Hakusisina kutanga noruvara vaya ganda. Tinobvumirwa angatsunga kutaura nedzimwe kunotyisa zvikuru vendudzi chisimba mhosva. Sei izvi mumwe? Tinogona chete tariro kuti rusaruraganda hakuna akaramba ari mbudzi uye vanhu vanogona yavo kusvika chii zvakawanda kutyira pachazvo uye kubvuma mumwe. Vafambi akasuruvara, asi kunyange Trayvon profiled “tika chena”. Saka anoita tora hapana mativi, asi ona pamakona ose. Beyond zvine mubvunzo, kwete mhosva.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:11 ndiri • pindura
Chii inonditambudza ndechokuti tiri saka anokurumidza kutenda nhema George Zimmerman akaudza sei Trayvon Martin akanga achitarisa nemahwindo mudzimba idzi mune vemunharaunda iyi. zvakare, hapana wedu vakanga asi Mwari akaona rose mutsekwende uye inofanira zvawanikwa pamberi pake uye pake oga. Chii irks ini ndechokuti tinofanira kuramba achienda nokoko neizvi yose ko ichi munhu dema kupara mhosva iyi pamusoro ichi chena munhu asi hapana chakaitwa. Izvozvo hazvina zvibereko zvachose. Ndinonzwa achikupopotera pamusoro kodzero dzevanhu kurovedzera kuwana zvaisanganisira uye kuita izvi pamusoro rudzi, isu tose kutamba chikamu. I pasi iwe kuti nyaya yako inofanira kuva nhau uye kwete kodzero dzevanhu kurovedzera kana vamwe kuti rudzi kwainge yakakura basa pane ari vakabvuma. munoona, vezvenhau Anonakidzwa mukusika makakatanwa sezvo zviri zvakanaka ratings dzavo. Last nguva I zvazvakaipira, zvikuru vezvenhau nehoro havana anazvo ne vashoma. It rudo mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose. Kana isu somunhu vanhu vane hanya zvikuru pamwe kuita purofiti kusiyana hwokukuvara isu amusunga pamusoro vanhu, pane dambudziko guru pamwe kuti. Ndinodada kutaura kuti ndiri patsva mwana waMwari. Izvozvo hazvirevi kuti ini kukanda chikonzero nepahwindo. Ndiko kutaura kuti chokwadi nguva dzose anobvumirwa pasinei nedzinza rako. The kusingasaruri nhema vakaudza pamusoro jaya iri, zvisinei yake kare, uye ichidzvinyirira characterizations nezvake uye kunyange Rachel Jeantel, zvose kuenda kuratidza kuti rudzi anoita nyaya. It kundikuvadza nomoyo wangu kuti muedzo uyu yakaguma nenzira nokuda Trayvon Martin sokuti vapondwa kaviri. Chokwadi chaicho chinorwadza ndechokuti, pane kushayikwa tsitsi nokuti mwana, zvisinei zvaunofunga nezvake, akarasikirwa noupenyu hwake noupenzi uye hazvina basa kuti rudzi rwake rwakanga. No yakawanda nharo achaita Trayvon shure uye hapana chitsama kunyunyuta chinoenda chokuunza kutendiswa kuti mhondi yake. Chii chatinofanira kuita here kuva netsitsi kune mumwe uye tozvibvunza, chii dai akanga mwana wangu kana mumwe mudiwa. Pasinei nokuti ndiani akakuvadza akanga kana haana, kuti uchiri kunzwa saizvozvo? Just nekuti FL ane mutemo hazvirevi kuti mutemo trumps shoko raMwari. Chero zvakaitika Usauraya? kururamisira kwaMwari nguva dzose kuchamira. ikozvino, Ndava kugara shure uye kumirira kuti tione kuti ndiani haangandinzwi kana kunzwisisa mwoyo this post uye edza kuchikoro kwandiri sei vanofunga zvinoitwa ichiripo anotakurwa kubva zvinoenderana.
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:11 ndiri • pindura
You kubvuma kuti hapana wedu vakanga, asi vanoti George akanga avete pamusoro Trayvon achitarisa kufungira. Kana vasipo, chii chikonzero zvaunazvo kudana George murevi wenhema?
Apo unowana yokuti rudzi rakabatsira ichi? George mentored vana vatema, akatora musikana mutema prom, uye aiva ushamwari uye kuremekedza vamwe vatema munharaunda yake vaivapupurira kuti aiva murume chimiro chakanaka.
nyama yangu ndicho chokwadi pamwe nevezvenhau, uyo akauya chaipo pasuwo rudzi-baiting nokudana Zimmerman ane “chena-Hispanic,” kuti kutanga moto pakati vatema nevachena. Shure kwezvose, kana pasina chinhu gakava, havagoni kutengesa vaGiriyedhi nzvimbo.
Ndine chokwadi kana George uye Trayvon aigona kudzokera vafambe kuti manheru, vangadai vose vanoita zvinhu zvakasiyana. Izvi haachinji chokwadi kuti Trayvon (kwete mukomana, asi munhu) akafa apo rakatanyanga Zimmerman, slamming musoro wake kongiri kakawanda. Izvi akazvarwa kubva hunoratidza uswa echitema musi Zimmerman kare, uyewo ziso-chapupu kupupura kuti Zimmerman akanga ari pasi.
Ndiri vakasuruvariswa nokufa mwana, asi ndiri zvikuru anorwadziswa mirayiridzo uye mararamiro kuti mwana akarerwa uye kumativi. Sezvo Jeantel akataura zvakajeka, iye zvirume nharaunda kuti vanhu chena havana kunzwisisa. A nzvimbo kuyaruka kwava vanosvuta muhari, nzvimbo vanhu chena vanonzi “tika”, uye zvakawanda. Izvi hudyu-hop mararamiro ari kuramba kuuraya vana.
Ndakanga achifambidzana musikana dema kana ndaigara muChattanooga makore shure akanga anetsa nevezera rake nokuti akanga “kuita chena” tichitevera dzidzo. mafungiro ichi kupi? Chokwadi hazvina mhosva vanhu chena kuti vana vaduku dema vari vachiseka vamwe vana vaduku matema kuti kuedza shasha muupenyu.
Ndiri kuedza kuita chikamu changu mukubatsira. Sezvo-software injiniya I vakazvipira uye kwakabatsira akaidzikira rudo zvemichina uye zvirongwa pakati vaduku matema vasikana Atlanta anotsanangura, kushanda anoshamisa matanho akaita Black Girls Code. Right zvino vechiduku ava zvose kutarisa kuti vari majee akafanana Nikki Minaj, uye wannabe-thugs rapping nezvebonde, mari, neshangu.
Tiri kukundikana vana vedu vaduku matema.
Chii chinangwa anoita yokuzivisa kuti iwe yomusi musikana mutema pawaive muChattanooga vanoshumira? Haufaniri kuzivisa kuti kwandiri ini kuremekedza pfungwa dzenyu. Ndizvo chinhu kuti ndechokungoti yokusafa. Chokwadi kuti ukabatsira muduku uduku dema haripi iwe nevamwe vagari chero chena kana. Handisi kuti utsinye kana kusaremekedza asi awfully fungira. The musikana mutema iwe kushandiswa musi haisi chete vatema munhu kutambura chero mhando kusekwa kana zviri kubva chena munhu, munhu mutema, kana munhu. ikozvino, Handina kutaura isu vasipo. Asi iwe muvare nhema, iwe nguva dzose kuwana mbavha. Just nekuti George Zimmerman vanotaurwa zvose izvi nezvokuva shamwari vatema, ebheriya vana dema, zvakare, hakurevi chinhu. Ever vakanzwa izwi munyengeri? wo, kana kuchinaya uye ndiri kuedza kuwana kumba, Handina nguva kuti peeking muna mahwindo munhu. Asi kana ini chete akaponda munhu kuti ndakafunga Aisavimba, Ndinoda kuita nepandinogona napo kuti kurondedzera kufungirana avo. Zvakanyorwa kunzi embellishing chokwadi. Panopera zuva, haafaniri neni kutarisana. Achaita; zvisinei, zvakatarisana Mwari, Hongu akanga mhosva, uye kunyange ndakanga mwoyo pamwe mutongo, iwe kana mumwe munhu anogona kurerutsa chokwadi kuti rudzi haana nezvaanoita chiitiko ichi; paitongwa, mune zvenhau, uye kunyange ikozvino. Kana rudzi haana kutamba chikamu, hapana mashoko aya kuti kutaura nezvazvo zvokuti. Uye kwete chete kubva matema vanhu. Zvinoshamisa kwandiri kuti ukataura pamusoro Rap Zvidhori vana vari kumusoro sokunge zviri vana matema chete vanoda navo. vana White ndivo vatsigiri kukuru Nikki Minaj uye Lil Wayne kuti pane munhu. Kana uine tsika vana chena kuti anogona kuumba izwi, “wigger”, ndapota regai kuzvinyengera vadavire kuti chete vanhu vatema. Chero nzira, pane upenzi kumativi ose uye ruvengo kumativi ose, asi ndapota musangane neni kana ukaedza Rehash zvaunonyanya kuda kuti kuratidza sei George Zimmerman mhosva.
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:12 ndiri • pindura
changamire, Ndiri kutaura kubva yangu kworuzivo. Ndokusaka ndakati akataura Aimbova wangu Tennessee, uye ndokusaka ini Zvinyorwa kubatanidzwa wangu abatsire akasika kushumira vana matema. Zvinosuruvarisa Ndaigona kupa uchapupu hwangu zvizere, uye achiri kunzi chete mumwe chena-the pawn nevamwe.
Ndinoziva Aimbova yangu haisi chete musikana vatema kuti kuremekedza. Zvandiri Zvairatidza kuti vana vaduku mutema dzichikwira munharaunda hadzikurudziri pachako kunaka. Izvi handizvo zvazviri vose zvavo, asi yangu kworuzivo zviri uncomfortably zvakajairika.
Kwamunoti George munyengeri, asi zvakare, kwakavakirwa chii? Unoziva George? Vakanga here ikoko kuti usiku? Hakusi kuti George akati akanga shamwari vatema, zviri uchapupu pachedu vechitema munharaunda yake akarumbidza kwaari nemashoko. Saka chii chinoita tinogona kudana hunhu wake mubvunzo apo vose uchapupu hunoratidza haasi, uye kumbova, musaruraganda?
Kana rudzi zvange, apo anoita uchapupu hunoratidza kuti? The chete panotaurwa rudzi tine nyaya iyi yose yaiva nemashoko Jeantel, uyo akati Trayvon akadana George ane “creepy mbongoro CRACKER,” uye pashure “Nigger.” The musaruraganda komendari vaibva Trayvon, kwete George. Jeantel akapupura kuti munzvimbo mavo, ndizvo zvavari kudana vanhu chena.
Handisi kureva kunyora vana chena vamwe mhando ngirozi. Ndiri kutaura tsika zvinofurira vana matema chete nokuti tiri kutaura pamusoro Trayvon panguva iyi. Ndiri zvizhinji kurwara zviri thug mafungiro pakati pavana vaduku chena, naizvo. Mwanakomana wangu, ndiani bi-rwedzinza, haangavi kukura pamwe bhurukwa ake kunhivi pamabvi ake, oversized Shirts, uye maonero kuti anotaura havafariri uye disinterest. Handidi kuona pakati vana chena, vana vatema, Hispanic vana, kana mumwe munhu. pachinzvimbo, Ndinoda kuona chino rinotevera kuita nani pacharo.
Ndinokuda, hanzvadzi konama. Uye ndinoonga yenyu chido. Ndiri kunyaradzwa nokuziva kuti isu tose kunyengeterera uye hanya chino rinotevera, uye tinoda kuona zvakawanda kubudirira kupfuura kare. Mwari komborera.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:12 ndiri • pindura
Jonathan, izvi kuenda hapana kutsanya. Handina kuverenga kwako rose pambiru nokuti handizokusiyi kuedza kuva kusawirirana nemi. Nditenderei kutaura, Handina kukushevedza George Zimmerman munyengeri. I kungoti nezva shoko. Uri patsva mwana waMwari? kana zvakadaro, nei tiri bantering neshure? Tiri kuedza kuratidza. Handina basa chii Trayvon Martin kuti makwikwi, akafa apo haana zvakare. Iwe vanotaurwa dzenyu mamwe romukova aiva jaya. Aihwa, akanga asina. Sezvo zvakaipisisa sezvo tinoda kuti kuitira kuti George Zimmerman zviri mberi kodzero kutora upenyu hwake, achiri mwana. 17 makore zvinotipa mwana. Akanga asina akura. Ndizvo saka kusuruvara pamwe polarization kwakaitika uye vatema nevachena uye akagara shure sezvizvi ndiwo mutambo uye yaanopinda chikwata Rack kumusoro pfungwa dzakawanda rowana. Ndizvo chete pachena akasuruvara. Kana Trayvon Martin akanga chena uye George Zimmerman akanga dema, Ndingadai vachiri kunzwa saizvozvo ndinonzwa ikozvino. Asi chokwadi chinorwadza ndechokuti, akanga George Zimmerman anga dema uye Trayvon Martin akanga chena, ichi kunge munhu zvikuru yakasiyana zvinozoitika kuti waita asungwa zuva 1, yokumira yake kana kuti kwete uye kuti mutongo zvamazvirokwazvo ingadai zvikuru yakasiyana. Sunungukai kushamwaridzana neni chero pasocial nhau nzira yokubudisa uchida kana uchida kuwana vanonzwa kuti ani ini here ndiri; zvisinei, panguva ino, Ndiri Kwaitweiko kuenda neshure nokuti saka havana kuenda kupi. Ndinoonga mhinduro yako kunyange.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:13 ndiri • pindura
Marvin, unofanira kuverenga mapikicha… Wanga uri kurwisa kubva pakutanga apo vachiri kuedza kuridza “pakati nepakati” kadhi. Iwe wakadana Zimmerman murevi wenhema uye mhondi uye kurwisa hama yako chena une wehurumende kukurukura. For mumwe, Zimmerman ari Hispanic.. Handisati ndambonzwa mumwe munhu kunoshevedza President Obama chena uye pfungwa iyi chete zvinoratidza kutsvetera yako. My maonero kuti vezvenhau vakaridza ichi kuva rudzi hondo apo nyaya wechokwadi here guta yomukati pamusoro pamafuro. Kune vamwe maitiro akafanana achifamba pakati dzimba dzisina zvakajairika mu pedzimba kana chine gedhi nzanga. Chero munharaunda yokurinda munhu angadai akawana izvi shamisa maitiro. Zvakaitika pashure chichange nharo nokusingaperi sezvo hapana aivapo kunze chete mukomana uye vatongi akatarira zvose uchapupu uye akatonga kuti nyaya yake osimudza zvokuti haana mhosva iye.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:13 ndiri •
Nathanial, Handina akarwisa munhu. I nyore vakagoverana nepfungwa dzangu. Kunyange vane simba, ndevangu. Zvaizova zvakakodzera here kuti kutaura
“Ndinonzwa sokuti iwe vairwisa munhu”. Ndinoziva kuti ndasvika mhiri uye handina varwise Jonathan zvachose. mafungiro edu akasiyana uye kana isu vari kuchinja pfungwa dzedu maonero, asi isu tichiri Zvaaikurukura. Achitaura kutsvetera, ndohwenyu zvakare pachena chaizvo. Ko George Zimmerman arambe ari Hispanic chokuita achiratidza kuti uyu akanga asiri pamusoro rudzi? Ko chiitiko haana kwakavakirwa rudzi kana zvikasaitika pakati nhengo rudzi vatema uye chena? Ko nhaka President Obama vane chokuita shinda iyi? Ndagara akabvuma ake dzinza masikirwo kunorevei. Zvinosuruvarisa, pane vaya vaizova funga iye nhema chete nokuda ruvara rweganda rake. Ehe, Ndakati George Zimmerman aiva murevi wenhema uye mhondi, vose mashoko vechokwadi. Just nokuti vatongi mhosva kwaari hakuiti kuti kana mumwe chenhema. Panopera zuva, chaizvo chii chiri kurehwa kuti muri kuedza Hammer musha? Ndine urombo kana uchinzwa sokuti ini uchirwisa ndiri munhu. Handine kubvumirwa kutaura mafungiro angu sezvo vose ari shinda iyi pasina kupiwa mhosva yokuva chinhu kuti ndinoziva handina?
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:15 ndiri • pindura
Mwari Pachange, asi imi muri kuita musaruraganda. Ukasateerera chokwadi zvakadyiwa nekuti Martin akanga mutema. Ndizvo chete chikonzero. Martin akarwisa Zimmerman pashure kunyangarika kwemaminitsi mashoma. No umhondi chakaitika, Muri vakanyeperwa sezvo vari 10 kunoita 1000 kwakaita vanoona izvi thru rudzi mavara magirazi.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:15 ndiri •
Chii Ndinowana kuva nani hilarious shamwari yangu ndechokuti uri kuita kubvuma pamusoro pangu asina kunyange kundiziva. On imwe Blog pano (After Trayvon, Pachava Kururamisira nokuda Florida Zvimwe Mira Your Ground Waitirwa?) musi Disqus, mumwe kwandiri rinonzi “Nigger” nokuti yangu nemaonero zvakasiyana nezvadzaifunga. Ko ndinomupindura? Aihwa. Kuregererei? Nekuti ndinoziva ani ndiri uye chii I kumiririra. Zviri varaidza kwandiri kuti imi anotaura Mwari richikunda sokunge aireva kuti uri muKristu. Kutanga kwazvose, Ini ndiri kungoita pakudzivirira Trayvon Martin kubva akapondwa kuti yenhamo usiku uye kuramba vakapondwa. Ndinoda kunzwa chaiwo saizvozvo dai aiva muduku chena mbudzana zvakare uye George Zimmerman vaiva dema. Ndiyo kufona kukoshesa vanhu. munoona, George Zimmerman imhondi. Iye devalued upenyu mumwe munhu nokuti ane akatadza kuwirirana raakatanga. Zvisinei kwake asunungurwa kubva “yomunhu” mutemo, mutemo waMwari akati “haufaniri kuuraya”. Akaitei? Akauraya apo yose ezvinhu kungadai. Chii modaidza rusaruraganda chinhu kupfuura pfungwa inobva kukosha I pachigaro Trayvon upenyu. Ndiri kupenga pa George Zimmerman, kana bodo, achaita kusangana Mutongi wake. Ndiri akagumbuka Mira Your Ground Law, Ehe ndiri. Kana asina kudzivirira munhu mutema hadzi, Marissa Alexander, uyo vaitiridzira pfuti achinyevera pa murume, uye zvadaro kwakaguma 20 gore mujeri mutongo wake, hakufaniri vakashandisa kuna George Zimmerman kana. Kuti tisafunge chinhu pamusoro wangu kuteerera chokwadi uye chete pakudzivirira Trayvon Martin nokuti rasviba kunondiratidza kutsvetera yenyu uye yokusafa rusaruraganda chokuita wako rudzi anotsanangura kubvuma. Zviri mberi pachena mune kushora kwako “10'S kuti 1000 kuti vanoona izvi thru rudzi mavara magirazi”. Ndinokutendai nokundiita kuseka zvazvo.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:16 ndiri •
Isu tose sezvo vaKristu vanobvumirwa kutora upenyu kana wedu munjodzi… uye zvinoita sokuti Zimmerman kwakanga. Zvinoitawo sokuti kuti murege kupa Zimmerman vabatsirwe kuti. Kana haina rudzi inobva, ipapo ruregero dzangu, asi iwe uri mumwe pevashoma kuti hazvisi. Asi iwe uri muKristu uye zvinenge zvose vamwe kuti ndakataura naye paIndaneti havasi, saka ini ndichakupai kuti kuremekedzwa. Asi zviri pachena kuti imi makatenda dzimwe nhema pamusoro nyaya asingaoni kana tichiteerera pachako. Ndipo kusembura wangu anouya. Ndakanga ndisina kutenda nzira imwe kana mumwe kusvikira Ndakapedza nguva kuti sezvo vazhinji zvinhu ndaizopedza. Yakanga chokukukatyamadzai chii ndakaona. ikozvino, Ndinoona kuti vakawanda vari kushandisa Marissa Alexander nyaya slam ari Zimmerman mutongo. Zvino Handizivi zvakawanda nezvazvo sezvandinoita uyu, asi ndinoziva kuti Alexander akapiwa 3 gore chikumbiro ngaakuitirei kuti iye akatendeuka pasi. asi, Handina verenga kuti chokwadi muna munhu namagwatidziro. Panewo uchapupu kuti iye angadai akasiya uye kunyange vakadzoka pashure iye aenda, asi handizivi kuti chokwadi, asi chikamu mukutonga zvakaitika. Asi pane chaizvo chikonzero chokudavira kuti Trayvon Martin akanga asiya uye vakadzoka. Paiva maminitsi apo Zimmerman anoti pafoni kuti 911 dispatcher kuti haazivi kupi Martin ari. Asi imi hamuna kuziva kuti nokuti hauna kuedza kuzviziva, waka? mashoko angu ose “10'S kuti 1000 kuti vanoona izvi thru rudzi mavara magirazi” anomira sezvo kunopfuura vechokwadi. Kune zvakawanda nevachena vanodavira Zimmerman mhosva nokuda ose pachake zvikonzero, asi pane chinenge hapana vatema vanonzwa Zimmerman angava mhosva iyoyo yose musaruraganda uchapupu rwaunoda.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:16 ndiri •
Ndapota itai henyu nyasha uye kuchimisa. SomuKristu, unofanira kuziva zviri nani pane kuedza uye kutsoropodza ini pamusoro nhema vanotenda. Kuti zvinoreva kuti munotenda zvose ruchibva mumuromo George Zimmerman aiva chokwadi. Handidi kubata kuti nekuti zvakare, Mwari chete ndiye Mutongi wake. The zvakawanda unoedza kuridza asingasaruri uye musoro pamusoro iyi, zvakaipisisa rikawira. uye zvakare, kurega kuzvitutumadza munoziva zvakawanda ichi nyaya ndakateerera ndakazvitsaurira. Ini ndiri munhu zvakanaka kuverenga, vakadzidza, munhu anokwanisa kufunga kuti ini, kunze Manzwiro. Ndiudzei muBhaibheri panoti kana upenyu hwako huri munjodzi, unogona kutora mumwe chete. Usauraya zvinoreva chaizvo kuti. Uye ndapota tsitsi neni yekare nokuurayiwa zvakanga zvakapararira nokuti nyasha dzaMwari vasina akauya. The Marissa Alexander nyaya, hazvina basa, chikumbiro dhiri kana kwete, kana ainzwa upenyu hwake aiva pangozi, iye aiva nekodzero kutsiga. Iwe kutsigira mutemo akaita yakasungirirwa kupinda nemaune musaruraganda nechimiro chokureva uye vari kuedza kudzivirira nayo, zvakare, kwete Nyatsotarisa. wo, kana uchinzwa bhaibheri kunoratidza kana upenyu hwako huri munjodzi unogona kutora mumwe chete, unonzwa sei pamusoro pamuviri vari pakurapa zvakakodzera. Just kuziva kuziva. zvakare, pakupera kwezuva, mafungiro enyu ndezvenyu uye vasiri kuchinja, kana ndezvangu. musiyano chete, rwangu zvinobva wakachena humán sokuona, ndezvenyu zvinongova kutsamwa nokukangaidzika kuti unonzwa iyi yaiva pamusoro rudzi. Ona kusiyana?
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:16 ndiri •
saka varwi muhondo mhosva yokuuraya?
Imi chete akaratidza kusaziva kwenyu kana chete mukuru nokushayiwa zivo… Mumire haana kunyange kushandiswa Zimmerman nyaya nokuda kwokudzivirira, akanga asina mhosva kunyange pasina mutemo kuti. Uyezve kuti murayiro rinoshandisirwa 2 kuti 1 mune nyasha African America kudzivirira pachavo pamusoro vamwe kuAmerica African pane nevachena kushandisa mutemo.
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:17 ndiri •
Ndizvo rakanaka musaruraganda mashoko.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:17 ndiri •
chii musaruraganda? kwakava chinhu iwayo ari kure musaruraganda
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:18 ndiri •
Hazvinei zvakadini uchida muchida kubvisa SYG mutemo, ari kunyatsofunga uye zvichiguma mutauro kunyatsotevera zvairatidzika SYG verbiage. SO mu dzidziso chete nekuti SYG haana naro, hazvirevi izvi handizvo hwaro chisarudzo. Uyezve, ndapota tsitsi ini nhamba dzako kana unogona kutsigira navo pamwe uchapupu. Nguva inotevera, funga mutauro wako kana uchida kuita kuti mumwe munhu asingazivi nokuti uri vasingazivi kana ukatenda zvechokwadi kuti SYG Mutongo rakabatsira hapana chikamu pakupedzisira. Uye kusvikira yenyu yakaumbwa Stats, ndapota kureva vasingatsigiri zvinotevera…
Iva nezuva rakanaka.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:22 ndiri •
sei iwe chete chaizvoizvo kuposita vaviri anongoitika vanyora?
Zvino anoita anozodzidza nezvedzimwe nhamba chaiyo:
Asi ingangoita muzvitatu Florida "Mirai Ground Your" maruramiro mu
zvinouraya zviitiko vave kwakaitwa vaipomerwa vatema, uye vakashandisa
kudzivirira zvinobudirira 55 muzana nguva, panguva zvazvingava dzakafanana
vagari takawanda uye pane pangozi kupfuura vaipomerwa chena,
maererano Daily Caller Kuongororwa imwe Database nekugadzirwa Tampa Bay Times. Mukuwedzera, vakawanda vanobatwa kuFlorida "Mirai Ground Your" nyaya kunge chena.
African kuAmerica akashandisa "Mirai Ground Your" kuzvidzivirira panguva anenge kaviri mwero wavo pamberi muna Florida vokuparidzira, wakange akanyorwa pana 16.6 muzana 2012.
Uyezve, Ini chete kuverenga nyaya muNew York mu 2009: http://rochester.ynn.com/content/top_stories/490926/jury-finds-roderick-scott-not-guilty/
Vorudzii rinoramba yose nhangemutange kadhi nharo kuti President Obama uye vamwe aitambisa iyi kuti munhu mutema akura vaisapemberera nemhosva kana vakauraya munhu chena kuyaruka.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:22 ndiri •
Handisi kuita chimwe chinhu pamusoro pako kwechinguva mumwe kupfuura iwe pachena havadi kuti zvakaipa uye nemiwo rudo kudzivirira mutemo vasingabvumirani. Ungave uchida kubvuma kana kuti kwete uye kuwana Stats inotsigira rondedzero yako, sezvo munhu anogona, SYG mitemo, kana naro mune iyi kana kwete, vane pakuvara kwemarudzi disparity. Handina zvachose hapana kuramba hurukuro iyi nemi. Sei? Unogona kubvunza. Chiri kuita zvachose. Munotiwo haasi kuzochinja uye kunyange ndezvangu. Zvinoreva handigoni kana vasingaremekedzi iwe? Kana. Zvinoreva ndaneta kuti achirova bhiza akafa nemi. Civil hurukuro iri zvechokwadi asina rudzi urwu uye izvi humwe uchapupu hwokuti tine refu nzira kuenda kuti tive rudzi rumwe pasi Mwari. Ndinonamata rudo rwake azara mwoyo wako uyewo zvangu uye mumwe munhu anogona kugumbura pamusoro Blog ichi. Itai manheru huru.
I kukuona skirted mhinduro yangu. Ini achakunyengetererai pamwe kuti Mwari abvisa wako “rudzi” nezvaro chokuita Ronga. Ndinoziva rusaruraganda achagara aripo kubva kumarudzi ose kune vamwe asi pane kuti vakatamira mhiri rudzi uye chiitiko ose hapasi vamwe vanhu kunze uko chokuita ruvara rweganda. Ndingadai vave vachinditsigira kana uchapupu yakaratidza kuti Zimmerman aiva nemhosva mhosva asi ini acharamba nharo naani kwave zvikuru kufurirwa ane zvinenge 100% chena vezvenhau nokwenhema vavariro kunyora nyaya iyi kupinda chinhu kuti vaswedere vanoiona iri uye kuti mari yakawanda navo uyewo kusundira zvavo Anti-pfuti chinangwa. Ivo doctored Video, makaseti matepi nezvimwe Nhoroondo dzakawanda rile kukwira vemunharaunda African American uye ndinofunga kuti chinhu travesty. Ndinovimba Zimmerman anokwirira unokutakwairirai dzavo kuti defamation uye guhwa.
Marvin Lee McManus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:23 ndiri •
Paunenge uchinyengetera kuti Mwari anobvisa nhangemutange nezvaro pamaziso angu, apo vachizvitora sevanotenda kuti ndicho chikonzero ndinopesana zvinofungwa ndinopesana, ndapota kuti munamato kungangotadza kuti rapfuura siringi yako. I skirted wako ashande nekuti handina kudiwa kupindura iwe kana hauna pfungwa zvauri kutaura apo ndiri kunetseka. Haukwanisi kusanganisa munamato rudo uye vanovenga zvose panguva imwe chete. kubvuma kwenyu kuti nokuti Trayvon Martin akanga dema uye ndicho chikonzero ndinonzwa nenzira andinoita zvakajeka chakaipa. Handisi kudzivirira kuti pfungwa mberi kwenyu kana ani zvake nokuti panopera zuva, uri kuenda vachiri kunzwa nzira zvaunoita uye unyengeri nezvazvo. Zvinoita okutuka ave mutendi kuti vanotoedza naJessica nenzira muri kana uchiziva woga kuti uchenjeri wechikoro yatakapiwa naMwari kuti kudai raiswa kuti manheru musi George Zimmerman kuti chikamu, isu hatingavatengeri muve hurukuro iyi. Munoona shamwari yangu, Satani anouya kugovera, uye iye zvechokwadi kuita basa rake nyaya iyi. Ndinobatisa mafungiro angu nekuti upenyu jaya akabatwa–PACHENA, MUNGUVA! Chokwadi kuti uri kudaro anodzvinyirira nezvazvo uchitarisira kuti nokuti ndiri mutema uye Trayvon Martin rasviba, Ndinofunga nenzira iyi, zvakajeka penga. Kuti kutaura rudzi nezvaro ichibudiswa pameso angu paunenge pachena kupfeka yako iri setsa kwandiri. Pane kunyengeterera munhu, yaungada kubvunza Mwari kutanga kutanga nemoyo wako. Unogona kuva vakashamiswa zvaanozivisa kwamuri.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:23 ndiri •
Wakatanga pamwe vachinyengetera, saka regai ini kutsoropodza pamusoro zvatinofanira kunyengeterera. Ndinofunga kuti unofanira kuongorora mwoyo wako, zvaiva pachena ichi chaiva pamusoro nhangemutange nokuti ini chokwadi ichi angadai akaita kare Tsvaga mashoko uye vanhu vakawanda pfungwa kana nyaya iyi vakanga dema riri dema kana dema pamusoro chena. Kana usingade kutarisana nechokwadi, kuti ndiyo sarudzo yako asi pane nyaya zhinji kuti kutsigira maonero angu kusanganisira nhema murume muNew York uyo akapfura chena kuyaruka akapfeka hoody uye kuwanikwa zvachose kwete mhosva pamusoro pezvinhu zvose. Paiva pasina yenyika vezvenhau kuratidza kusimuka, hapana chena rudzi chacho chatyoka kudana okutsutsumwa. nyaya iyi yaizova yakasiyana zvachose akanga Martin asina akarwisa Zimmerman uye ndinodawo kutsigira zvakawanda sezvaunoita asi wechipiri Martin akasarudza akanga achienda rokukukuvadzai Zimmerman uye kurova musoro wake nomugwagwa uye nezvibhakera chiso chake, Akashingaira kuti vaizopfurwa. Period.. kuguma nyaya… kudzingira kunze nhangemutange uye kuti ndiye pachena uye zviri pachena.
Wow. Ndosaka pachine chinosemesa rudzi ukama munyika ino. Zviri zvinopfuura pachena chii ndakati zvisinei kana sei ndava akaratidza pachangu, iwe vanogutsikana generalize rangu maitiro angu manzwiro. Ataura kuti, unakidzwe munamato nguva uye ane upenyu kukuru. Ndinovimba kuti ndichakuonai mhiri.
Nicole • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:24 ndiri • pindura
Ndinobvumirana kuwana mwero pakutsanangura pasocial kusaruramisira kwose. zvisinei, kwakange makaseti pakutanga apo akashandisa kwemarudzi slur uye ane nhoroondo kudana vakomana dzevatema munharaunda. Race angasava chete chinhu asi.
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:24 ndiri • pindura
Nicole, George akadana kwaari “enderera,” uye “add * cking Punk.” The chete uchapupu chero rudzi slurs akauya apo Jeantel akatora akamira uye akapupura kuti kunyange akanga parunhare Trayvon, Trayvon akadana George ane “creepy mbongoro cracka,” uye pashure “nigga”.
George mentored (dzinenge mbiri) vana vatema, akatora musikana mutema prom, uye kunyange vaitsigirwa vechitema munharaunda yake basa rake yomunzvimbo yokurinda. Pakanga zvachose pasina uchapupu kuti Trayvon akanga rudzi profiled, kana kuti George ari musaruraganda.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:25 ndiri • pindura
basa guru sezvo muchiziva zvinhu zvenyu. Maiwe varipo chete 1 mamiriyoni saka matema vanhu kunze uko kudzidzisa chokwadi panyaya iyi semi vakaita Bean uye Nicole. Amazing sei vakawanda vanoda kutenda rudzi ruvengo uye haagoni akaipetenura zvakasimba zvakakwana.
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:25 ndiri • pindura
Aaa.. Ndinofunga rakanga “coon” kwete Goon. Ari kwemarudzi izwi.
Izvi zvinei ikozvino zvakadaro? Tiri tose chete kurwisa chete kuti pfungwa yedu maonero asi zvakare?? Ndine asi kuona munhu uyu Forum Exchange chinhu zvinovaka.
Ini handingatongogumburwi izvi.. tiri kuva nechechi.
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:25 ndiri • pindura
Gakava pakati coon uye Goon - musiyano c uye d. shamwari George kwakaitwa nehasha gumi (uye dema, kana kufunga) anofunga rinoshandiswa yakanga “enderera,” kutaura haana kunzwa munhu muduku kupfuura 40 vavo kana 50 kuti kushandisa “coon” somunhu kwemarudzi slur. Ini pachangu handina kumbonzwa coon kushandiswa senzira derogative; Ndava nokusingaperi chete vakazvinzwa kushandiswa sokunoratidza raccoons.
Paunoongorora uyu zvakawanda audio clip mune chiedza zvose, zvinoita zvakawanda pakuti akati “enderera”. Shure kwezvose, Joe Oliver (shamwari yaGeorge vatema) akati kuti mune gumi haana kumboona chinhu kuti zvinoratidza George ari musaruraganda. George akatora musikana mutema prom, uye mentored vana matema. Hapana chinoratidza kuti anoona mumwe munhu kuva zvishoma pane iye nokuda ganda ravo ruvara.
gakava Izvi zvinokosha nokuti chechi rinoumbwa mhando vanhu vose vakasiyana, dema nechena. Akadaro inosuruvarisa seizvi kungaita mapoka makuru ari mumuviri zvinooneka, uye sezvo vakadaro tinofanira zvose kufarira kushanda chokwadi, kwakavakirwa chikonzero uye uchapupu, kuti ichengetedzwe nyaya mumuviri.
Aihwa, Akati ndiye fu **** d chando. Google nayo. Teerera Audio. The FBI akataura kuti aiva zvakataurwa. Pakanga pasina musaruraganda slurs kunze Martin.
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:25 ndiri • pindura
Une ekuteerera apo Trayvon akati chinhu musaruraganda? Ndinoda rudo kuzvinzwa.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:26 ndiri • pindura
Saka muri kudana Rachel Jeantel murevi wenhema? Kana iwe kurasikirwa uchapupu wake?
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:26 ndiri • pindura
Pamwe haana kutaura vorudzi izwi ipapo. Handizivi zvaiva mupfungwa dzake, asi ini handifungi Zimmerman aiva musaruraganda. Akaita Zvisinei “rudzi Profile” Trayvon. Uye kuti Zvinosiririsa pacharwo vazhinji zvikonzero…
saka, tinofanira kukurukura…1. sei isu kubata vade yepamusoro mhosva for nhema vemunharaunda? Ko vanhu kunyange hanya kuita chinhu nezvazvo sezvo vakawanda vanoti kwayo ane “nhema” dambudziko? 2. Tingaita sei kurega pigeonholing vanhu kupinda vamwe pfungwa dzinobva ruvara? Ko nhepfenyuro? Zvakadini nhamba idzi, chii chaizvoizvo kureva? 3. Tingava sei yakabatana? Ona mumwe vamwe pfungwa maonero? Pamwe vane zvakawanda forum apo vanhu vakurukure zvavo nazvo?
Ndinoda kuva kuti nhaurirano, asi dzichirwisana hakuzofadzi kubatsira. Chii chiri kurehwa kukandirana kutukwa? The achiunza Muma1960. The achitaura nhema pamusoro matema mhosva prices sezvo vamwe kururamiswa.. Nei vanhu vachiita izvi? Just kukuvadza mumwe nomumwe?
SevaKristu, tingava muenzaniso sei ngaiungane ezvinhu akaoma seizvi? Tingashandisa sei muenzaniso waJesu kuti haana kutanha rubanzu muziso rehama yedu- asi kuti tizviongorore uye bvunza kana tiri kuita zvose zvatinogona kuti nyika ino ive nzvimbo iri nani?
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:27 ndiri • pindura
Wrong Nicole… zvakawanda nhema uye mashoko okuti kubudikidza nhangemutange hustlers uye norupo vezvenhau. Zvichatora nguva refu kuti vanyanye zvose nhema kuti vatema vakawandisa kupfuura kufara kutenda. Nicole, usingazivi chokwadi. Please dzidza navo.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:27 ndiri • pindura
Nicole, hamuna kuteerera muedzo? The chete rusaruraganda slurs akabuda mumuromo Martin maererano shamwari yake akanga achitaura naye pafoni.
lewrites • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:27 ndiri • pindura
First kure, Ndinoreva pasina kusaremekedza…Ndine chena / chizvarwa American. Asi ndava chete akambonzwa “enderera” panotaurwa vanhu vatema. Kusvikira chii Jonathan Thompson ari…Ndanzwa uye vanhu kuvazivisa avo naivowo matema vana nokuti vanoda “civilize” ivo kana nokuti vanoda kuita chiito chavo zvakanaka zuva nokubatsira mumwe rudzi.
Handisi Martin zvakanaka kutaura zvaaitaura. Ngazvisadaro. Ndinofunga mativi akaita zvakaipa iyi uye handitendi tichazomboona kuziva chokwadi. Shure kwezvose, yakawanda vanhu vakakwanisa munataisireva umhondi nokuita wose tenda nyaya yavo…paiva nyaya pamba mamiriro umo mukomana akauraya musikana achiri kuyaruka uye vakasimuka vanhu nhema kwaari uye kuvapa umboo. Pakupedzisira vanhu havana abuda uye chokwadi, asi ndiri kungotaura chete nokuti mhosva uye vanhu vakati zvose zvinhu izvi pamusoro pake hazvirevi havana kuva kutendeseka. Ndiri zvakare kwete vachiti kuti akanga ari kutendeseka, kana.
Imwe nyaya pamba hurumende zvaisanganisira nhabvu mutambi kuitwa kusvikira vafa pedyo vakomana vaviri kubva imwe chikoro ari musangano. Pasinei ziso chapupu nyaya, umwe vaviri ava varume vacho kure Scott vakasununguka, mumwe akakwanisa kuwana chikumbiro ngaakuitirei kuti umhondi. Vanhu vakapupurira majaya maviri aya Kuziva nezvibhakera mukomana uyu wakati musana wake akatendeukira kwavari, uye vakaita kuti kumurova to akanga pasi, fenda, ipapo vakapamura pavakanzwa sirens. Uye mumwe wavo Rinotarisira kufamba.
Pane mumakomba makuru ari kururamisira mugadziriro, nokungoti munhu nemhosva hazvirevi zvavari mhosva. Pane rimwe divi, yakawanda vanhu vari nekusimba nemhosva uye kunyange vaurayiwa kuti vakazonzi kuwanikwa kuti mhosva. vanhu vaviri chete ziva zvakaitika usiku ihwohwo
jonathansampson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:28 ndiri • pindura
Handina akambonzwa “enderera” kushandiswa senzvimbo kwemarudzi slur vanhu vatema. Just akadzokera kuongorora Urban Dictionary uye hazvina sokuti kutaura rudzi chero zvayo pamusoro tsanangudzo.
A “Enderera” kazhinji mumwe chimumumu, kana hombe. Mafia vatungamiri kwaangatumwa vavo “goons” kuti vaite zvaidiwa. Just kuva kwazvo I aitarisa Mabviro, uye zvakare asingadi nyora chero shamwari rwedzinza. Rinoti kuti vengarava, tsandanyama vanhu, uye gare gare munhau kuti mutemo.
Kana chii mhinduro dzako pamusoro mazano vaduku vana matema nokuti uchida “civilize navo,” hatigoni kufungidzira vanhu vavariro kwakavakirwa redu Fungidziro zvandakatonga vavo - inongova kwete zvakanaka. Kana George mentored vana vatema, uye handina hwaro kuzvitutumadza vamwe ngaakubvumirei rangano kwake, Ndinofanira kufunga kuti nokuti aida pavo.
Bottom rwokuyera Zimmerman nyaya iri kuti uchapupu hunoratidza George akanga ari pasi. zvipfundo zvomunwe Travyon anoratidza kuti akanga punching munhu. musoro George zvakaipisisa maronda uye kurohwa. Akange pamwe kunyange vasati kuva gweta, kunyange kutora mapurisa kuti vadzokorore zvakaitika. Matikitivha akatora nyaya yake pamusoro uye pamusoro, dzakasiyana nguva, kutsvaka zviratidzo zvinonyengera uye kuhuwana. By ose usaruyera sokuti George akatya nokuda kumukuvadza pamuviri, kana kunyange rufu. Hatina chikonzero kureva zvimwe.
Ndinobvumirana kuti vanhu vaite zvinhu zvinotyisa uye munataisireva naro, apo vamwe vanhu vari zvisina kurangwa pamusana pemhosva dzavanenge vasina kupara. Handifungi yaimbova zvinoshandawo George; hakutsigirwi uchapupu. Asi ndinoita kufunga yokupedzisira sezvinoita zvino ane kuvanza kuti azvidzivirire uye mhuri yake apo nyika ruchipa iye ave musaruraganda - anokonzera vatema nevachena zvose pamusoro kumushuvira rufu.
Pane mumakomba hurongwa; haazorambi nharo. Asi isu hatina hwaro pamadiro vanowana chero nei sezvo mugumisiro makomba ivavo – kwete pasina zvimwe mhando uchapupu, kana rakasimba pfungwa. Zvinhu zvose izvi zvakaitika, vose mashoko takava kuburikidza mwedzi kuongororwa, zvinoratidza George kwave akatendeseka pamusoro kuti usiku. uchapupu ziso-chapupu inotsigira nyaya yake. uchapupu nzeve-chapupu inotsigira nyaya yake. The chokwadi regai misalign nomufananidzo wake pachavo. Tinofanira, vachiremekedza chikonzero, kuchengetera zvimwe yokufungidzira uye mutongo Mwari.
Kana uchida kuona nyaya zvakajeka rokuzvibaya mhosva, tarisa hapana kupfuura John Spooner. Murume ari kuma70 akapfura mwana muduku matema kaviri masikati gore rapera. Kuziva “chena ropafadzo” haazorambi kumudzivirira, Iye ndakakuvadza kumusoro kuteterera kupenga. Kuti raizova nzvimbo yakanaka kutsvaka rusaruraganda – ari Zimmerman nomuedzo haisi. Sezvo chiedza-ganda hakudereri iwe munataisireva umhondi.
lewrites • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:28 ndiri • pindura
Ndizvozvo, hatigoni zvokufungidzira chinhu, Zvechokwadi Ndinobvumirana. Zvandiri kuedza kuita kutamba dhiyabhorosi kutsigira. I kuziva kuva chiedza ganda isingaswederi uchienda umhondi (mune zvakaitika mukomana yokuuraya musikana, ari mukomana akanga chena, mune zvakaitika nhabvu mutambi, vose vaive matema).
Asi hazvisi zvachose kunze bhokisi kufunga…tsime…kunze bhokisi. Urban Dictionary I here kuenda kuti zvakawanda nokuti zvakawanda zvandinoda kunzwa kumativi randinogara hwakasiyana chii akaisa pamusoro kuti nzvimbo. Zvichida nharaunda yangu ibasa mashoko akasiyana siyana zvirevo. Sezvinoita thumb mune dzimwe nzanga iri yakaenzana pakati nomunwe.
Ndakanga chibharo sezvo mbudzana dzechiduku munhu uyo ​​hapana angadai nokusingaperi vanofungidzirwa kuti chinhu chakadaro. A akanaka njanji chinyorwa, vabereki vakanaka, sokuti munhu akanaka. Munhu wose vaifungidzira sezvo zvikuru…rudyi? Kana mumwe munhu akanaka, sei Vaigona kuita chinhu chakadaro kwandiri?
Zvakakwana kutaura, iyi kunounza kumusoro zvakanaka hurukuro pfungwa, zvisinei kana kusarurana aiva nechido. Hongu, zvenhau zvokudya pamusoro payo, uye zvakanga zvaisemesa kuti vakaita saizvozvo. Ndaiva nevezvenhau guru kukoreji, tinodzidziswa kuti unbiased, asi vamwe vanhu tengesa kuna dzesangano kuti nyaya iri nani, zviri zvakaipa.
Ndokusaka ndinonyengetera kuti vose mhuri, I kuzvisiyira kuna Mwari kuva wokupedzisira mutongi, nekuti pakupedzisira, Ndiye chete munhu ane nzvimbo kuita kudaro. Ndine urombo kana ndakaita chinhu kusaremekedza, Ndaireva hapana.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:28 ndiri • pindura
Goon hapana dzinza slur nechinhu pfungwa. All mumusoro wako.
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:28 ndiri • pindura
Wow muri musaruraganda.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:30 ndiri • pindura
Vezvenhau haana hanya nyaya yako, nekuti hamusi Black. Nevachena uye vaitaura chiHispanic vari muchinjikwa bvudzi kuti musaruraganda vatungamiriri vakaita Jackson uye Sharptin.
Iwe chaizvoizvo zvakarurama sezvo munyori uyu zvisizvo vakauya munhangemutange paakati Zimmerman profiled Martin uye iwe nokuchenjera akapa chokwadi vakanga vasara kunze. Kwemarudzi ruvengo anogona kusimudzira kana vanhu dzinoshuma tisingafungi. Haanawo panze kana asingazivi kuti Martin haana kufamba menzira apo kuenda kumba, akatema kuburikidza mamita chete tsoka shoma kubva mudzimba uye mikova kuunza fungidziro pamusoro pachake. Zimmerman yakashuma kuti kurarama kune 911 opareta achifamba uye achishamisika Martin. Sezvo akashuma mupenyu kuti Martin akanga aenda uye akanga arasika naye. Nei Martin kudzoka sezvo maminitsi uye nei ichi chokwadi zvose kukosha akadarikira pedyo network uye vazhinji? A chokwadi akataura kazhinji, asi nguva dzose kusiya kunze nevanhu vakawanda vatema uye chokwadi, nhangemutange hustlers vakaita Jackson uye Sharptin.
BQPhotography • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:30 ndiri • pindura
Izvi ndezvechokwadi! Ndinovimba uye kunyengetera tinogona ichishanduka kubva ichi
gdoggydog05 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:31 ndiri • pindura
dambudziko iri, wo, kuti hakuna vanobvuma kuti kuri musaruraganda kuti vanhu kusarudza nyaya iyi sezvo kukosha kuti vose zvirire muna, uye ane mafungiro pamusoro, pahwaro rudzi. ndinoonga nehanya kwenyu pamusoro, sezvo ichi ndechimwe zvishoma vasingazivi namagwatidziro kuti Ndakaverenga, asi ini ndiri chena 26 gore mukono yekare kubva suborbs uye ini yave anoshungurudzika iyi. Zvakasiyana chete vafambi kuti anoratidza rusaruraganda mupenyu. Chokwadi kuti nyaya iyi inozivikanwa zvachose zviri rusaruraganda panguva yawo sendarama chimiro. Tiri kutaura nyaya iyi nekuti mukomana dema afa. Takaita vakafunga dema trajedy (pamwe zvinoitika kakawanda, uye izvozvo Zvinosiririsa, asi kwete pfungwa dzangu pano) kuva kupfuura dzose dzimwe zviuru njodzi ose zuva. Kune zvose zvemarudzi trajedies vanhu vatema yokuuraya chena vabereki uye kunyange rudzi zvakakurudzira ndivo, dzisina kushumwa uye glazed pamusoro, uye ichi zvakare, kuri kuva dzose chinhu. Panguva Wisconsin zvakanaka, Ndinotenda zvakanga, makore mashoma apfuura chikwata nokupenya inoumbwa American kuyaruka African yakapamba Fair uye chikwata kurwisa nevachena-chete, mune zvimwe zviitiko ivo chibhakera vanhu vakwegura kumeso, vakafamba mudzimba omunharaunda uye bhizimisi nhamba uye aibira uye kutyisidzirwa nechisimba, uye hapana nenhepfenyuro. Ungafungidzire kana boka chena kuyaruka nangananga vatema? The nhau anosarudza, uye kana ukasarudza, kana iwe chete omerera “chete munhu mutema anogona kunzwisisa” divi iyi, kuti munhu mutema dambudziko chinonyanya kukosha mumwe, kunyange ikozvino, apo vaitaura chiHispanic, ChiChinese, nevachena, vari vakaurayiwa yakafanana fashoni. Iyi angava yokufananidzira abatwa vatema “hondo,” ndinonzwisisa kuti. Asi ichi hachisi nzira yokugadzirisa nayo. Ndinoziva kuti chiso kuti ichi chete akawedzera kuti musiyano pakati pedu. Zvawabva somunhu chena murume kuti handisi kunzwisisa sei inofanira profiled, asi chaizvoizvo ndakanga profiled vose nzira chete, sezvo jaya. Ndinobvumirana, zvinonzi moreso aneganda ruvara rima, asi “diki” une chinhu chokuita nayo zvakare. Unoti Handimbofi kunzwisisa, asi pamwe haumbofi kunzwisisa chii zvinoita kuti ndinzwe sokuti kana Hama dzangu dzose matema pfungwa Martin, uye regai kunyange kubvuma chokwadi kuti hazvina kuipa pakutanga kusarudza trajedy ichi sezvo kukosha avo mazana zvakafanana trajedys kuti zvinoitika mazuva ose. Ndinotenda ndiyo chivi. Ndizvo zvandinofunga. Kuti vanotadza Mindset yakati chinozvikonzera chero chiitiko wekusarudza rudzi rimwe pamusoro perimwe. Uye ndinotenda ” hamuna nomushangu dzangu” chete akawedzera kuti musiyano pakati marudzi uye ndiyo isingaruramisiri statement. Unoziva zvazvinoreva kuti ini kuti haana kuenda kukoreji, nekuti ndisina 8 chikuru achiisa kumativi, pandaiona African vokuAmerica zvakafanana mamakisi kuwana gwapa rangu uye bhezari? Zvichida regai. pfungwa yangu, kuti chero nguva imi munoti “hauzivi zvazvinoreva kuva ruvara rwangu,” muri kuita chinhu zvibereko, nokuti handigoni haangatongovi ruvara yenyu. Ndinotenda kuti vatema vari sezvo mapofu nyaya vari kukonzera rakadzika kamura pakati marudzi. African America vakarinda ichi Travon Martin chinhu uye kufunga chimwe chinhu, apo nevachena vari kufunga chinhu chakasiyana zvachose. “Hazvinyaradzi chete uye zvakanaka kuti nyaya iyi kuti vakasarudzwa zvakakosha, uye nembiri, uye yakakura kupfuura vamwe vose, pahwaro rudzi?” Ndine asi kuona rimwe African American muKristu kutaura izvi. Uye kufuratira kuti chokwadi ndiye musaziva. Kungava chokwadi kuti vatema profiled, asi kusarudza kuisa nyaya pamusoro chiratidzwa kunobva makwikwi kwakaipa, uye vasingakuremekedzi mamwe marudzi kuti vanourayiwa sezvinoita travon yakanga.
Deborah Bilbo-nembira • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:47 ndiri • pindura
Gdoggy, zvose wareva zvine musoro. Ndiri dema uye amai vevanakomana vaviri ani Ndakamutsawo kuona vanhu kuti hunhu hwavo uye mutsa kwete ruvara rweganda ravo. Vanakomana vangu wafambidzana vasikana chena, vasikana Hawaiian, nezvimwewo. uye ndinogara akavaudza ndakanga ndisina dambudziko nacho nokuti tiri tose zvakasikwa naMwari uyo wakarurama uye wakanaka. Munhu akasikwa kamura ichi kare kare panguva Shongwe yeBhabheri. This vari akati, kusvika kutongwa. Ehe, Nyaya Trayvon wacho aired uye kwaiva zvinodiwa kuti mubatanidzwa kuramba vanhu uye avo vazvione. nyaya. Chii vamwe vanhu vatema havanzwisisi ndechokuti vanhu vatema vari musaruraganda zvakare. Tinofanira kuita nesimba kwete mhosva zvose rudzi. Hakusi pamusoro rudzi chete, zviri pamusoro George Zimmerman haana kuteerera mapurisa kana vakamuudza “NOT TO TEVEDZERA.” Zvino vamwe kunaka ndezvipi vakakweverwa nokusateerera wake mutemo rakarambwa pakupedzisira akamudzivirira pamwe Mira Ground mutemo wenyu. Ndinonzwa tsitsi zvikuru mhuri Trayvon kuti, kunyanya amai vake kwete nokuti aiva mukomana mutema asi nokuti aiva MWANA raamai! Utsotsi kururama pasinei unoita izvozvo asi akanga zvechokwadi kuita mhosva nokusaparadza achifamba nomugwagwa? Zimmerman akanga kumhanyirira kuita, anofanira ndakamirira rebei kuona zviito Trayvon vakanga, kana akanga kuenda kutarisa mune hwindo kana kuedza dzinopaza mukova pamberi kumutevera. KUKOSHA IS GEORGE Zimmerman kuteerera A DIRECT MURAYIRO FROM kwemitemo! Itai masvomhu.
gdoggydog05 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:47 ndiri • pindura
ngaavongwe nokuti kunzwisisa zvaunotaura dzangu. kunzwa kubva African vekuAmerica semi, anoita ndipei tariro. Ndinobvumirana George Zimmerman akanga achiita noupenzi. anofanira ndakamirira cops, pasinei kutsamwa aiva kuti munharaunda kava ipazwe….hongu ndizvozvo. hapana zvishoma, nokuti kuteerera murayiro iwoyo chete, Ini dont funga anofanira kuenda kujeri upenyu kana nemhosva yokuponda. tinofanira kutarira munhu chiitiko. hazvo chii chinoitika. ndikupe muenzaniso. OK mienzaniso miviri kuti Ndinofunga chengeta kururamisira mupfungwa. mumwe nyaya, murume dzinamatenga…. anoziva kwayo zvakaipa asi nechinguvana utera, achityaira mumugwagwa iye kupotsera milkshake rake mcdonalds nepahwindo….. pamberi apo, munhu anoona milshake, anofunga ayo ari tsuro rabitt (ndinoziva mienzaniso aya pusa, murefu neni) uye swerves, kunotambudza motokari ikafa. chii munhu mhosva? umhondi? …. hapana ane mhosva littering. chivi zvose inotungamirira kuuraya. chivi ndiko chikonzero nei Kristu aifanira kufa. Asi pano panyika, tichitongwa maererano mhosva, kuchengetedza hurongwa. Zvakanaka, pano chimwe chiitiko chakafanana apo muduku chiito kunokonzera mikuru maitiro. Simbe asingashandi nesimba zvakakwana pamusoro pfungwa panguva mabasa anokosha zvakafanana nokutarira shure kwake 2 gore mwanakomana yekare…. ane mwana wake ari mumotokari mumotokari kumhanya uye musuo garaji pasi… anokanganwa wake pafoni mumba….. kudanwa kunouya kuburikidza, iye anopedza pamusoro awa pamusoro kudanwa uye anobuda uye mwana wake wakafa. Chii iye mhosva? Just usimbe uye ndisipo kufunga? tsime, mwana wake haagoni kuzvidzivirira. Iye mwana. Aiziva akanga mutoro wake vakaregeredza chiito kunokonzerwa rufu rwake. Ichi umhondi. Mwana akanga asina chikamu it.Only iye ane mhosva. OK, Zimmerman vanofanira nemhosva mhingaidzo kururamisira uye zvichida zvimwe zvinhu …. asi, kana zvayo chokwadi kuti travon akatendeuka pamusoro pake uye akanga kumurova, uye ipapo amupfura. George Zimmerman mhosva yokusateerera mapurisa. Asi pane imwe pati rwokusarudza zvinobatanidzwa. Kana Travon aiva, vanoti, 3 sarudzo….. manya (akanga akapotsa zvachose nokukurumidza….. enda mukati….. kana zvichida kutsamwa uye kunangana George kuti nei akanga hassling naye. havazivi zvaakaita. Ndiyo pfungwa. Kana akanga achiedza kutiza uye matsvuku pasi Zimmerman, umhondi kwayo. Asi kana travon, mukuzvikudza, kuva nehasha (Ndinonzwisisa ichi….kare, dai ini ichi kunge )…. Zvino panguva iyoyo, Naiyewo akaita rusununguko sarudzo kuda kuti airidza munzvimbo chokupedzisira mugumisiro. Dambudziko iri isu dont kuziva izvo mumwe wevaya occured. Kana isu tatanga kuchaja vanhu kwakavakirwa ripple anokonzerwa nenhema dzedu, uye zvitadzo zvedu….Ndinofunga waizoona kuti tinofanira vose rakakiyiwa kure. George zzimmerman iri mhosva kuvharira nemapurisa….uye angava nemhosva zvakawanda, asi pasina kuva ikoko, Ini chete havazivi.
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:47 ndiri • pindura
Zimmerman haana ndichipfeka mhosva ndizvo Ndinofunga kushatirwa chaizvoizvo akanga. Ndakasviba asi rubatsiro rwangu hakutsigirwi rudzi zvachose. Kana marudzi akanga atendeuka ndinoda kunzwa 100% chaiwo saizvozvo. Murume ane pfuti maringe mbudzana.
Neniwo ndinofunga kuti kana muri musiki nokusvitsa kana mamiriro ezvinhu ane ngozi.. muri culpable vasinganwi… Ini chete dai FL vaiva mutemo kuti aigona achamuranga, nekuti Z akabuda kutsvaka nhamo usiku.
Ndinonyatsotenda kana Exchange akaswedera Trayvon, Trayon kunyange tsamwisa, kuti achiri mupenyu nhasi. Ndinofunga kuti zviri sei ndiri agumbuka. Ini chete kuona izvi sezvo mbudzana vakarasikirwa ake upenyu kuitwa kune imwe, kana asina kupfuura, basa somunhu.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:47 ndiri • pindura
Hauzivi chokwadi kana bhinzi. Wana chokwadi uye zvichida uchanzwa nani.
Rita • Zvita 9, 2014 pa 2:24 pm •
SB, Off ose youtubes kuti ndiyo ofniesfve handina ndamboona. Iye sezvo musaruraganda sezvo Sharpton uye Jackson. Handina kumbobvira saka embarassed yangu nyika kubvira kuti mutema kupfikura vakakunda pamusoro dzakaminama nhangemutange!Kana iye Akapfeka leggings avo kure AF1 Ndinoenda f'king nzungu.
Haana kuteerera! Ziva zvinobatanidzwa. Hamuzivi vose.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:48 ndiri • pindura
Vakati haufaniri kumutevera… hazvirevi sokuti kuva murayiro wakananga. Uyezve, imwe opareta pamusoro 9-1-1 haana pakupedzisira simba. Zvaiva yakaipisisa kuti mukomana aifanira kufa, asi ini chokwadi zvakanaka kukurisa vakomana venyu vaizova nokusingaperi akarwisa Mr. Zimmerman vakamurova musoro wake nomugwagwa uye akaputsa mhuno yake. Angadai akabvunza avo vakanga, vangadai vakapindura nomutsa uye nei vakanga vachimhanya pakati dzimba munyika chine gedhi munharaunda uye upenyu anopfuurira.
pepjrp • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:48 ndiri • pindura
Your akanaka mudzimai Deborah, asi imi muri chakaipa sezvo inogona kana iwe wakati zviri pamusoro George Zimmerman haana kuteerera mapurisa kana vakamuudza “NOT TO TEVEDZERA.” Haana kuteerera munhu. Teerera Audio musi Youtube! Akati OK uye akatanga kufamba shure rori ake. Akanga kufema paakanga kutevera Martin, asi pashure akati OK, vakadzivira rinorema kufema sezvo akapindura vaviri zvakawanda mibvunzo pamusoro kero nokuda cops akabva aisa kuva nhamba kwemaminitsi apera uye rinotaura zvakajeka kuti haana kuziva Martin akaenda. Martin akanga chete 50 mamita kubva pamba, asi iye akadzoka panzvimbo. mashoko ako KUKOSHA IS GEORGE Zimmerman kuteerera A DIRECT MURAYIRO FROM kwemitemo zvachose nonfactual uye iwe sekusina worudzii munhu anoda nhema. Iwe wanga uchinyeperwa sezvo vave 1,000 uye 1,000 kunoita vamwe! Teerera uye kutsvakurudza uye muchaona kuti ndiri kukutaurirai chokwadi! magadzirirwo, ari 911 opareta akati kuna Zimmerman “Hatifaniri hedu kuita kuti”. Zimmerman akati OK uye unogona kunzwa kuti akarega achimhanya. Get chokwadi havatendi musaruraganda nhema.
Andrew Keeter • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:49 ndiri • pindura
nokuti anotsanangura Muchiitiko yake kwazvo.
Izvi nebope pakati Zimmermann uye Martin akanga chinhu
zvinoitika zuva nezuva munyika ino uye sezvo zvakawanda nenjodzi sezvazviri kuti
ona jaya akauraya, pazvirongwa nenjodzi kuona vezvenhau kutendeukira izvi
vorudzi nemhepo muedzo pasina chakanaka Mugumisiro inobvira kana Zimmermann dzaisafanira
mhosva. Kuti usiku Trayvon akapfurwa
kwakanga kusina dzinza vafambi kubudikidza Zimmermann zvinogona nekusimba. The venhau pamwe Jesse Jackon, Al
Sharpton, President Obama, The New Black Panther Party nevamwe nguva huru
vakakurumbira African American akasimuka kupa maonero avo pane zvavanofunga
zvakaitika apo pasina munhu kunze Trayvon Martin uye George Zimmermann aiziva zvechokwadi chii
zvakaitika. Zviito izvi akasika dutu
marudzi chisimba wehurukuro rusingabviri akamira. Ndinofunga tinofanira kunyengeterera mativi iyi
kutongwa uye kumbira kuti Mwari kupindira kunyaradza avo vari vachikuvadza, akatsamwiswa, uye
vakavhiringidzika panyaya izvi yose.
Satani ane kudzora vezvenhau munyika ino uye anoita zvaanoda
naro. Imi chete kunzwa pamusoro nyaya
kuti achawana zvikuru kuteerera saka zvino izvi nekambani zvenhau dzemapurisa vanogona kutengesa
mhepo nguva yokuti nemabhizimisi kuratidza zvokushambadza.
Ndinoreva Ndoda Unofunga kuti mhosva panguva ino
kutongwa musi Fox News, CNN, MSNBC nevamwe Affiliates kuitira kuti mabhizimisi aizowana
zvokushambadza avo kutengesa zvigadzirwa zvavo kuruzhinji. Hazvisi pamusoro ukataura nhau pamusoro
rufu jaya nzira asati nguva yake uye munhu amupfura…..zviri
nezvemari unova mudzi wezvakaipa zvose.
Izvi nhau nhepfenyuro vave kuratidza muhwezva izvi kare matatu
masvondo vaiunganidza kuwedzera mari chete anoruda. I Bet vaifungidzira muedzo kuenda mberi kwenguva refu
saka vakanga vasingagoni kuramba Raking ari Purofiti.
It kurwara sei tinopa zvikuru hwedu kusvika TV uye vachiriteerera saicho
ndiye mudzidzisi wedu patinoita tinofanira kuisa pfungwa pana Jesu. Iwe kunyange une rwiyo kutaura nokutora
meso ako iwe uye achivaisa paari.
Tinoda kutora maziso edu kubva TV uye pfungwa pachedu munharaunda yedu uye machechi. Kana tichirarama California, Virginia, New York,
Montana, Texas, nezvimwewo… tisingagoni kuchinja zvakaitika Florida apo Trayvon
akapfurwa, asi tinogona kuchinja nzira munharaunda yedu anoita. Tidzidzise vana vedu nezvaMwari, Jesu, uye
Mweya Mutsvene. We nevasanagurwa vemunharaunda
vatungamiriri, vehurumende, mapurisa madzishe, mayors, nezvimwewo kuti mumire yedu yechiKristu
tsika uye haangazvidembi shure pasi padzinova pangozi nevaya vachine
vanofukidza pamusoro meso avo. Hatigoni kuramba
kutaura zviri kuitika maawa kure kana pachedu munharaunda yedu iri kutamburira
kubva chete nyaya. Ndiri chena 28
munhurume akakushandira nyika iyi vachirwa muna Iraq hondo. Ini muAtlantic kunyika vane
hapana akaona zvose zvizhinji Ndichiri kurerutsa nhasi kuti izvi
vanhu aizopa ruoko kana gumbo kuti.
Zvakandifadza kuti pane matambudziko akawanda zvikuru munyika ino kupfuura
kuduku kukakavara tichiita. Satani
anoda rile vanhu uye vawane vose akagumbuka pamusoro kwemarudzi mhirizhonga. Mumwe munhu akati iri yavo romukova, asi Ndicha
vanoti zvakare. The chete ruvara tinofanira kuva
hanya ndiko ruvara dzvuku-achimiririra ropa raJesu. zvirokwazvo ndinonzwa marwadzo enyu mukuva rudzi
vafambi nekuti pandaiva muduku ndaiva yangu uye achiri nhasi ndaona
naro. Gdoggydog05 akaita pfungwa huru pamusoro
Vana chena vasingakwanisi kuenda kukoreji nekuti havana zviuru
madhora vavete kuridza, asi vana vemamwe marudzi vari kuwana mari
kubva hurumende kuvabatsira kunze.
Same chinhu anoenda mabasa pa chikafu kutsanya kana mabhizimisi sezvizvi. Ndakanga rudzi profiled pandaiva muduku
kuedza kuwana basa panguva McDonalds uye vaviri vana vaiva rakasiyana rudzi zvino ini
akawana basa uye handina. Hazvina kunaka,
asi upenyu haisi zvakanaka dzimwe nguva uye kuti ari chaizvo kuratidza kuti Satani
kutaura iwe. Kana Mwari anogona kukanganwira vose
chivi zvenyu sei ganda ruvara raizova nyaya naye? Kwemarudzi vafambi ndiyo ino, Satani
mutongi wenyika ino kusvikira Jesu auya shure kudzokera. Kusvikira ipapo tinofanira kurarama munyika ino, asi isu
haufaniri kuraramira ino. isu
vanoraramira zvinhu kupfuura ino vachiisa isu kupfuura rudzi. Isu tose ndagura hwokurwa. Vamwe ndagura hwokurwa kuti vakanga
anokonzerwa ruvara rweganda ravo. vamwe
akaenda kuburikidza hwokurwa nokuti nzira muviri wavo akatarisa. Vamwe vakaenda kuburikidza mukurwisana zvemukati kuti
vakanga kunokonzerwa kubva pakuberekwa. Vamwe vakaita
ivo zvinhu vanonzwa havangambovi pamusoro uye chii chakaitika kune vanhu vose ava
pavakasvika pakuziva Kristu? vose
akanga kubatsira hwokurwa dzavo. Achaita
kutibvumira achawa uye achatitungamirira kuburikidza kurwisa. Izvi Trayvon VS Zimmermann chinhu anofanira
kumisa nokuti mutongo yave asvika.
The kururamisira Hurongwa aita basa rayo uye tinofanira kutarira
zvinhu. Kana ichi nyaya yaiva pakati maviri
Vanhu chete ruvara isu sorudzi ndambonzwa kuti achizvinzwa uye
chete mutongo angadai dzamboparidzirwa pasina munhu anoziva. Tinofanira kurega kubvumira vezvenhau uye
vakakurumbira kudzora pfungwa dzedu. kana isu
kutenda kwedu muna murume zvino isu achakundikana.
Regai kutaura pamusoro pavo uye akaisa maziso ako pamusoro KWAARI.
shope • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:50 ndiri • pindura
Nevachena vave akarwisa vatema pasina chete chikonzero. Yeuka KKK?
Matty • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:51 ndiri • pindura
Ndichiri chose anobvumirana zvose akati pano, Ndinofunga kuti kunokosha kutevera chokwadi uye kwete manzwiro edu iyi. mapurisa Local uye FBI vangosarudza kuti rusaruraganda haana nezvaanoita iyi. Havana kuwana uchapupu hwokuti Zimmerman profiled Martin kunobva rudzi rwake. Vakawana uchapupu kuti Zimmerman profiled Martin kwakavakirwa fungidzira basa. Zimmerman chete akapindura apo akabvunza nemapurisa pamwe chii rudzi Martin akanga. Haana kudana uye vachiti akanga achitevera muduku mutema murume. Handisi zvaisava kwemarudzi vafambi. Asi uchapupu haabvumiri kuti tiite kuti kutsunga. Uye tinongoita kusarudza kubvuma zvakanga dzinza kana pasina uchapupu kuti chokwadi inoita nyaya dzinza kana haafaniri kuva. Race haana kukwira paitongwa. Kana mukutonga vakatenda Zimmerman aiita nevavariro musaruraganda, regai Unofunga kuti ungadai akwire? Mukutonga aifanira kuwana jurors kudivi ravo…kupenda Zimmerman somunhu musaruraganda kungadai nzira yakanakisisa yokuita kuti.
makataura pamusoro nyaya iri kusimba chaiyo uye kusimba shata. Ndiri chete nharo kuti iyi, kupenda sechinhu musaruraganda nyaya kana uchapupu haritsigiri zviri ngozi uye hakuvaki.
Samuel Coleman • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:51 ndiri • pindura
Watch Video ichi….
Trip I rudo uye Remekedza iwe, mumhanzi enyu shoko asi Ndinobvumirana zvachose pamwe Jonathan Sampson pazasi….
Ini vanobvumirana kuti pane zvachose rusaruraganda nhasi asi iyi kuwana nhau nzeve ndiyo boka crap.
All dzokushungurudzwa kuti Glen Beck taitaura akamuka 000000000 Media nzeve…. Sei ??/ bec tine Liberal vasiri muKristu Country ari kutevera Baba Dhiyabhorosi…. Uye tine President anotamba nhangemutange kadhi nokusingaperi miniti .. sei ? Kuti awane zvaanoda …. kwete Justice kwete Chokwadi….
Somunhu chena murume mukoma wangu yakaitirwa pfuti nguva bec akanga chena.. somunhu chena murume baba vangu uye shamwari yake kukoreji vakanga vabuda kuparidzira uye akamuka rakatenderedzwa achishandisa boka Blacks bec vakomana chena havana kuva munzvimbo iyoyo racho.. shamwari nehama dzangu akadzitora chivhorovhoro akapukuta vaende.. Baba vangu vakataura mashoko Mutsvene, achibvunza varume ” muri nzara” uye Mwari achiziva vakanga vasina kudya mumazuva mashomanana vakaponeswa Baba vangu…….
Kwete handisi munhu mutema asi ndinonzwa chakashata kuti Trayvon uye kana paine REAL rusaruraganda…
Country dzedu achiburuka zvaimutambisira.. Romans 1. Mwari akatipa kusvikira yakaipa pfungwa…. Zvatakaona chinhu kana tichienzanisa chii huchauya.. Maka mawadhi angu kana America mberi nenzira kuenda uchava vasiri pamutemo kuva muKristu uye tichaita kuti akapondwa mumigwagwa..
Dave • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:51 ndiri • pindura
Koshesa nyaya, rwendo.
Chimwe chinhu Ndinofunga kuti zvakanaka kuti isu sevaKristu kuyeuka ndechokuti tinofanira kuvenga rusaruraganda / kusaruramisira nguva, pasinei chimiro kana fashoni anouya kana ruvara kwakanyorwa akatungamirira vakananga. Chinosuruvarisa chinhu pamusoro pezvinhu zvakadai nyaya pamusoro Trayvon ndiye pakakoromoka kazhinji kunova vakwanise & zvinoita zvakawanda matanho anotorwa shure pane mberi, nekuti vazhinji default kuti kutora dzinongoitika kumativi (ruvara Somuenzaniso) pane kusarudza mativi kwakavakirwa kururamisira / kusaruramisira. Umambo hwaMwari inofanira kushandura nzira lenses tiri kupfeka kuona nyika. Tinofanira kuva pamusoro kuita zvakarurama pamusoro kuita maererano edu rudzi. Tinofanira kuva pamusoro rudo tsitsi pamusoro kuitwa dzakawedzerwa nehasha udyire.
Izvi hazvisi pakupedzisira vorudzi nyaya. Ichi chitadzo kwevanhu nyaya inoratidza pacharo nenzira dzakasiyana-siyana, dzimwe nguva achishandisa waanotsigira kwakavakirwa rudzi. Vanhu vanobva zvose marudzi akasiyana kufanana nevechiduku & profile eachother. Hatifaniri kumisa imwe ruvara (siyana kupfuura edu) sezvo muvengi. Vanhu vane zvivi mwoyo kufanana nevechiduku. Haisi marudzi ari & pachavo pakupedzisira kuti vaite kuti. Kana tinokanganwa kuti & kurarama pazasi mutsara izvo zvinotarisirwa umambo vagari, Tichava tiswedere mitsetse kwakavakirwa rudzi & chete vanoguma kuwedzera ruzha.
Ngativei murwire kururamisira apo rinofanira vakakurwirai, kwete kungoisikira avo tinogona kunzwisisa, asi kune avo vari kubatsirwa zvisinei. Satani & Sin vavengi. Uye ivo vakundwa Jesu pamuchinjikwa & pabwiro. Dai isu kutanga kunorondedzerwa ruvara rutsvuku pamusoro chero, ruvara kweropa raKristu kuti akatisuka vakachena.
Nicole • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:55 ndiri • pindura
Zvechokwadi Ndinobvumirana kuti rudzi runovawo chivi nyaya, haina kuti kurambwa. Asi kutsanangura chaizvo chivi nyaya kunotibatsira anokurukura navo zvinobudirira. Sex kutengesa ndiwo mudzi, imwe nyaya ruchiva asi achitamburira yakasiyana chaizvo pane achitamburira pachako chivi muropa. The Bible rine mienzaniso yakawanda nokurondedzerwa akadai zvakanaka. Uye kwekuratidzira zvose zvinofanira kushanda kwanyanya vanhu Kristu, chete ichapedza.
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:55 ndiri • pindura
Ndiri muKristu wokutanga, dema wechipiri- kana yechitatu kana kuti kuva akatendeseka ndiri chete muKristu. I kutsigira Trayvon uye mhuri yake kwete nokuti aiva mutema, asi nokuti aiva mbudzana. A mutongo rufu nokuda punchi zvakaoma kwazvo pane mutongo nokuda mwoyo wangu kana hana yangu kubata. Trayvon akanga zvakawanda zvokudzidza muupenyu… Hatina kugumisa ziso uye ziso, zino nezino kururamisira naJesu? Aigona Trayvon haana vapfurwa ruoko kana gumbo? Sei mwoyo wake? Ndiri kuitira akasuwa nokuti kurasikirwa neupenyu, uye hazvina basa kuti ruvara akanga- Mwana wafa. Neniwo funga sezvo mukuru, Zimmerman ane zvakawanda basa (mumaziso angu) kuchengeta zvinhu wakadzikama. ikozvino, akaita kuti? Kurukurai nenzira noushamwari nzira kuti akanga akarinda? Mwari chete anoziva. Uye Mwari chete achaitira ruramisiro yechokwadi.
“All ndinoziva iri handisi kumba uye izvi [nyika] haisi apo ndogara.”
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:56 ndiri • pindura
Uri kuzvitutumadza Zimmerman zvainanga kuti mwoyo wake? Ndine chokwadi Zimmerman angadai akasarudza kuti kwete kuuraya mwana kuti akanga achiedza kurova pfungwa yake.
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:56 ndiri • pindura
The bara chairuramira emwoyo, saka zvingava zvakakosha kufunga kuti aiva Zimmerman aiva nechinangwa.
Chero aanoda yake yakanga havagoni kuchinja zvaakanga chaizvoizvo akaita. Ini ndiri tsvarakadenga chokwadi kana ndakanga vasatsva, uye ndaiva pfuti (inova Kashoma), Ndingadai kupfura dumbu rake, ruoko, gumbo- kumwewo kunze mwoyo wake.
pachena iwe hatina kumbova kurwa… dai nguva yokuti yakawanda vanonanga iwe angadai akapfurwa mudenga uye regai mukomana kutiza
Tylor • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:00 ndiri • pindura
ngationei mberi kukurukura nyaya rusaruraganda, ehe. asi kurega kushamwaridzana zvenhema rusaruraganda pamwe iyi. pashure pegore rokuchera uchapupu hapana aiva nokusingaperi kuwana chero shred kuti uchapupu rusaruraganda muna Zimmerman kare kana kuti usiku. ngationei kurega kutevera zvipoko uye pfungwa chaiyo rusaruraganda – kufanana mhando vezvenhau akaratidza yose iyi nyaya kumutsa kwemarudzi ruvengo uye kubvarura isu oga chete kuwedzera ratings dzavo.
Tony Cline • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:00 ndiri • pindura
Hazvinyaradzi musaruraganda kufunga kuti munhu mutema zvakawanda ane ngozi pane dzimwe marudzi apo African muAmerica vanoumba 12.6% vokuparidzira asi akaita 49.7% paumhondi, uyewo zvikuru disproportionate chikamu zvibharo, nezvakasiyana, akapakatira, uye nezvimwe zvinhu zvose mhosva yacho FBI inocherechedza kunze DUI? Ndiko kuti musaruraganda, kana inongova akangwara sarudzo kunobva akakodzera chokwadi? Handirevi kuti rusaruraganda haako; zvinoita, uye kumativi ose. zvisinei, pane zvimwe pane achiti kuti munhu wose anonzwa kunaka kumativi vanhu vari statistically zvikuru kunge matsotsi chisimba ari musaruraganda.
Washington DC vaEvhangeri • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:00 ndiri • pindura
“Beloved, haana kutsiva pachenyu, asi siya kuti hasha dzaMwari, nokuti zvakanyorwa, "Kutsiva ndokwangu, Ndichatsividza, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. "Asi, "Kana muvengi wako ane nzara, zvokudya naye; kana aine nyota, mupe chimwe chinhu kuti anwe; nokuti nokuita izvi, uchatutira mazimbe anopisa pamusoro wake. "Usakundwa nezvakaipa, asi kunda chakaipa nechakanaka.” ~ Romans 12:19-21
C. • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:01 ndiri • pindura
Handisi chaizvoizvo kupokana chinhu iwe wakati, kunyanya sei ndakashata zviri kana vanhu vasiri kupiwa kunobatsirei mubvunzo kune zuva nezuva nguva. Asi ndichivimba shamwari vamwe cops Ndinoziva kuti, nekuti vamwe vavo, Kupa kuti vavariro ingadai yakawanikwa vaurayiwe. nyika ino iri saka wakaputsika uye bhowa dzimwe nguva, mhosva uye zvisingavaki muviri zvose pamusoro penzvimbo. Jesu chete anogona yokudzura isu kubva mairi.
Ndinovenga kuti waifanira kugadzirisa zvinhu. Uye ndinovenga kuti mune dzimwe nzira vafambi munhu nakisa shata, ipa faniro (kwete Zimmerman nyaya). Its nesimba zvakare, pamwe venhau netsika kuti uchibatanidza mufananidzo worudzii yakapotsa inoparidza yakazaruka, va neukasha, zvitutumadza mutemo. Uye kuti pane vanhu kuita mari kure netsika iyi mhirizhonga uye Godlessness. Uye kuti vanhu vakawanda kudaro vakanga vasinganzwisisi zviri akafanana kuva mumwe mukomana aigona hanya zvishoma pamusoro vachiziva zvazvinoreva kuva mumwe mukomana.
Ndinoda kuti Mwari rudo saka simba zvikuru kupfuura nyika. Ini chete dai kuti rudo rwaMwari vaizotorwa kakawanda kuratidzwa munyika kuburikidza nesu, uye kwete pasinei isu.
Kukurukura inofanira zvachose kuramba. :)
Great zvinhu Mr. Lee. Mwari komborera!
apallo95 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:01 ndiri • pindura
apo urudzi ndihwo hombe yakawanda vanhu sokuti kukanganwa kuti Zimmerman akanga latino pachake. chete kuisa kuti kunze uko sezvo chokwadi kuti zvinofanira kuyeukwa apo iyi rinokurukurwa
Lizzi • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:01 ndiri • pindura
Ndinotenda nzira inobudirira chaizvo kuti kurwa rusaruraganda ndiko kuti vanotya Mwari, Varume dema akatendeseka vanorarama upenyu kuti kuzvidza kufanana nevechiduku kwatiri kunongedzera uti No, chivi ndiko dambudziko, kwete rudzi. Ndine yakakwirira zvikuru maonero zvinenge zvose varume vatema nevakadzi ndava neropafadzo kudana shamwari uye zvevapi vamazano. Ndiri vangangoiswa nekambani yavo nyasha kupfuura zvimwe… Reach Records chinhu chihombe chinhu ichi, nekuti musikana tsvukuruka kukura munyasha uye dzikavakwa pane bhizimisi raiva nepurofiti nemimhanzi kwavo. Zvauri kuita zvinobatsira chaizvo.
Lynn • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:02 ndiri • pindura
Ameni, Ameni!! Tinofanira kuda nerudo rwaKristu uye kunyengeterera mhuri zvose kuti vanobatanidzwa. Rusaruraganda ariko uye mwoyo kwandiri kuona. Ndinokutendai kugoverana ichi!
Michael • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:02 ndiri • pindura
Ndakanyora ichi mangwanani manheru ichi ndisati ndaverenga renyu romukova, iyo I kuwana zvachose nenzira, uye ndakafunga ndinoda kuchiudzawo
Saka kana uri kuvanza pasi padombo Zimmerman akawanikwa asina mhosva rimwe zuva. Vamwe vachange korokotedza, vamwe vachachema kunhuwa. Mutongo Izvi akaparadzanisa nyika uye mune zvimwe zviitiko kunyange kereke. Ndaiverenga kutaura nhasi kubva munhu vezvenhau, uye zvavaitaura chaizvoizvo akaita ropa pamota yangu. Pachedu ndapa ichi zvakawanda pfungwa, uye ndine pfungwa dzangu, asi this post haisi pamusoro zvandisina kana musafunga pamusoro Zimmerman kuti aquital. Jesu akati Mbavha anouya kuzoba, nokuuraya nokuparadza….(John 10:10) Division chinhu chinyararire muurayi. Inokura kubva mbeu inovavisa Vakasimwa mumwoyo yedu kana isu kutora maziso edu kure Jesu vachabuda kana tikasangwarira. Luke 6:45 anoti “Munhu wakanaka kubva pafuma yakanaka yemoyo wake unobudisa zvakanaka; nemunhu wakaipa kubva pafuma yakaipa unobudisa zvinhu zvakaipa; nokuti muromo wake unotaura zvinobva nezvizere mwoyo wake. ”
Jesu paakatanga ushumiri hwake pasi desciples vakaona Jesu politcal nemumiriri. Vakanga vachitarisira Jesu swoop uye nekodzero chakaipa kuti Roma vakange vaita kuvaJudha. Vanogona kunge vakanga kunaka naJesu cracking walnut vamwe misoro Roman kana zvaireva kugadzirisa makore basa. Asi kubvira zuva rimwe Jesu akaparidza rudo uye muranda Hood. Panguva imwe nguva vadzidzi probablly afunga Jesu haana kuenda Bruce Lee munhu. Handizive kuti vakafunga kuti voga? Vanhu vechiJudha ndagadzirisa basa kwenguva refu zvikuru nguva. Chokwadi ndinotenda kubva mubhuku rokupedzisira Old Testament kusvikira panguva Jesu zvakada 400 makore. Avo mbeu chigumbu nekuvava rurege ndakabatikana yakanga yatumbuka uye vakanga vagadzirira kuwana kunyange. Mesiya akanga Pakupedzisira kuuya yakanga nguva dziite mauto, ruoko pitchforks uye taramba yemauto. Asi pavakanga kubatidza mwenje Jesu kunoparidza Ida muvakidzani wako muvaitire vamwe zvaunoda kuti vaite kwamuri. Kuti aifanira kuvadzinga pusa. Kuwedzera Kuzvidza zvinokuvadza sezvo Jesu akarembera pamuchinjikwa, Akakumbira kuti Baba aizovaregerera, nekuti havana zvechokwadi kuziva zvavaiita. Saka chii izvi zvose zvinoreva?
Jesu aiva mumiriri rudo uye sehama dzake uye nehanzvadzi tiri akateterera, kwete isu vanorayirwa kuita zvakafanana. Nekuti panopera zuva Rudo ndicho chete chinhu kuti vachatitaka nokusingaperi anoshandura chinhu. Tinogona dutu Castle, uye rikanganise zvose tinoda, asi nguva dzose pachava munhu zvakarongwa akavanzika kana tisiri kuziva kutanga. Love haanga- akakuvadzwa mwoyo uye kunobatanidza akaputsika ukama. rudo, anovaka, rinokurudzira, uye zvakamunakira. Rudo harirambidzi, kana kuramba, inosanganisira. Tichikurumidza kukanganwa kuti tichiri ALL NAVATADZI Kristu akafa rakateurwa ropa rake yakaitwa kuwanikwa: vapfumi, varombo, nhema, chena, (uye mumvuri dzose pakati)akarurama, wakapfeka, nherera, asi tariro, pokugara, vanomanikidzwa, asi vakaramba, vezvitendero, vechiIslam, gandanga, mwana anobhinya vana mbavha, kubhengi Mutungamiri, gweta, ari fayameni, enyika, chiremba, uye zvimwe munhu wose anenge ose vakavhomora mweya panyika ino, Jesu akavafira. Kana paine kunyunyuta kuitwa ipapo ngazviitwe pamasuwo kuGehena kubudikidza mwenga waKristu, achitaura kuti Tichafara rudo, tichashumira, isu uchakanganwira Jesu akaita kuti isu.
Eric • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:02 ndiri • pindura
Nei African American, Handisi nokuzvideedza Irish American, Ndinongova American, Ndakaberekwa pano kwete Ireland. Ona kuti ndipo panguva iyoyo atanga Vakagovana muzvikwata, ipapo tiri nani kupfuura iwe, kunotangira. Kuti panguva iyoyo dzinoita rusaruraganda, vose vari zvakaipa, Trayvon, chaiva slamming Georges’ achatungamirira muvhu, ndinoiitawo kana akanga asiri kuita chinhu chakaipa nei asingadi iye chete vanoteerera? George aifanira kuteerera dispatcher uye regai cops mubato payo. Asi pomoto American mureza, kwete African American, Mexican American, Irish American, Chirungu American, kana wokuScotland American mureza, wakarurama American, zvakaipa. Ndizvo zvakafanana achisiya mwoyo ose American kufa kudzivirira zvose zvarinomirira. The rufu kutyisidzira kuna Georges mhuri uye vakawanda muzita Trayvon nokuurayiwa kwakaitika vari nzira zvakaipa. Ishe anoti kutendeukira kwavari rako rimwe dama, kana kuti isu kukanganwa ari mutariri pano. Trayvon kusina mutsvene, uye George akanga hakuna mhondi, vakanga vari mamiriro edu ezvinhu. Hapana munhu anofanira kunge yakawanikwa rikarova uye hapana anofanira vakafirwa upenyu hwavo. Izvi zvakanga zvose enyika kutamba kuti simba uye munyengeri mukuru angosimuka zvaaida. Ramba midzi neshoko renyu kwete nevezvenhau.
Beans • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:06 ndiri • pindura
Ndinoda kunzi wakarurama ane American. Kwete African American. Asi nhamo vanhu haanganditeveri kubvumira kuti. Ndiri sezvo American chero mumwe. Asi vezvenhau kwakaita zvakawanda pamusoro kamura.. uye vanhu vakatengwa mariri.
Ndinorangarira rimwe mabasa chokutanga ndaifanira. Mumwe mukadzi wechichena akagara pedyo neni uye akandiudza.. “Saka unoziva muri wokutanga African -American isu vanobhadharwa?” Akanyemwerera uye akatarisa unozvikudza saka. Zvichakadaro, Ndainyara, sezvinoita vamwe chiseko Tsoko kuti akasvika Zoo wakagadzirira kuvaratidza zvakanaka sei zvavo “chekutanga” mushandi dema aizoita. Nei kuti ataure kuti panze uye kuti ndinzwe kudaro… shamisa? Ini chete kuva hwandaiva mbudzana pa basa rake rechipiri kubva kukoreji, asi pachinzvimbo ndakava paranoid nyangarara..
Saka nei ndinoti African American? tsime, Ndinoita kusarudza?
gabetaviano • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:06 ndiri • pindura
mashoko Awesome, rwendo. Sorry kwawakamboita kuenda kuburikidza ezvinhu une. Ndinoyemura iwe nokutaura nezvazvo, uye nokuda achiyeuchidza avo vedu vasina. Press pamusoro!!!
David • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:07 ndiri • pindura
Izvi aiva nechokuita rusaruraganda. Oh, I akakanganwa, iwe uri mutema saka unofunga kuti une tsika simba kupomera mumwe rusaruraganda. Nesu tiri zvose racists. Ndine hurombo, kuti marara yave stinking refu zvakakwana. Nguva vasina marara uye hongu inguva mberi.
geebee • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:08 ndiri • pindura
NDINE urombo wakambofurirwa kwemarudzi vafambi muupenyu hwako. ini, wo, kunge zvavakaramba uye hanya kuti kungotaura
“mangwanani akanaka” kuti chitoro vanamabharani kana vanhu I kupfuura mumugwagwa. Ini yave pangozi uye akaudza Handina nhengo munzvimbo uye aiva nani ngavabude, nekuti ndiri chena. Mwanasikana wangu kwave akaramba kodzero yake kaviri kuvhota, asi handifunge iye ari “disenfranchised”. Asi zvino handina ruvengo mongers akafanana Al Sharpton uye theNAACP achitaura kwandiri; chete pamusoro pangu. Sorudzi, uye sezvo waKristu, Ndinofunga tinofanira kufunga VAPARIDZI pamusoro rudzi uye dzedu kusiyana uye kusiyana, Tinofanira kudzokera kuva “mukuru American utsotso muhari” sorudzi, uye kuzviyeuchidza kuti tose vakaenzana mujinga muchinjikwa Church. The zvakawanda rudzi uye rusaruraganda rinokurukurwa, zvikuru ruvengo inondipa, izvo, somunhu Kupona mashandiro, Anondivatisa kunyumwa vemamwe marudzi uye kashoma kuwedzera Gospel kwavari. Uye kana usingadi kubatwa somunhu zvichibvira thug, kana akachenjera Guy, kana Redneck, havapfeki uye kuita somumwe.
Leslie Pollard Stivers • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:08 ndiri • pindura
Ndaifarira this post. I vanoonga kunzwa zvakaitika yenyu uye mwoyo wangu hwatsvuka kuyeuka chokwadi kuti vafambi zvinoitika zuva nezuva. Handigoni kubatsira, zvisinei, kubvunza chii iwe nevamwe vanofunga chii ichi nyaya inoti neizvi rusaruraganda. Zvinoratidzika kwandiri kuti nhema munharaunda izvozvi ari vachifuratira zvachose nyaya yacho (unogona tarisa chinhu yose YouTube) uye achimusarudza pazuva vafambi chinhu (hapana anonyatsoziva kana Zimmerman akaita saizvozvo uye chimiro uchapupu paitongwa kunoratidza kuti GZ haana musaruraganda sezvo vanhu vakamuita kuti ave). Zvakadini kana Trayvon aiva mukuru (mbanje maitiro ake, zvinowanikwa kuvhuya chitunha)? Ko kana hunhu hwake zvinoratidza kuti angave ari thug? Ko kana akaita chokwadi kuteverera George uye kukanda nokurohwa wokutanga? Izvi uye zvakawanda vakanga kukurukurwa urefu paitongwa uye uchapupu hunoratidza kuti kunyange Zimmerman angadai akaita sarudzo akachenjera (kwete yakawanikwa kubva mumotokari yake, Semuyenzaniso), haana kuita chinhu zvisiri pamutemo. Hatizivi zvose mhinduro dzemibvunzo iyi, asi nokuti jaya rasviba hazvirevi kuti kana anotarira uye anoita somunhu thug haangazvambarari profiled somunhu. Hapana sokuti kubvuma kuti mbudzana iyi chisimba (pamwe baba vake Sanford nekuti akanga raizosungirirwa kurwa, kuba, kushandiswa kwezvinodhaka, nezvimwewo) akaita sarudzo zvakaipa zvakare. Ndinoda kuona mumhanyi kubva murume dema kana mukadzi kuti unodanidzira pamusoro kupera thuggery mukati munharaunda dzavo. Ndinoda isu vashoma kuva nezvebhizimisi kudzidzisa kwedu majaya nemhandara kutarisa zvakawanda sezvinoita Kristu. Kunyange vakomana vangu vaviri vari zvishoma vakareruka-ganda kundipfuura uye kurege kuva zvakafanana nezvakaitika zvandakaita, Ndichati kuvaudza kuti varambe kunyemwerera vanhu batira muhomwe dzavo uye haazombosiyi kuita zvakanaka. Handisi kuramba kuti rusaruraganda aripo, asi ini ndinoona kuti zviri vanorega kuipa kubva vechitema izvozvi. Ruvengo chena seethes zvakaipa uye kusaziva. Vanhu vari kuita chinhu vanovenga. Hakuna rugare, hapana kukanganwirwa, pakupedzisira hapana kutenda muna Mwari kuti kururamisa zvakaipa munyika kana kuti kuvimba naye kuzvidzikunura zvose. Vanhu kusvetukira pamusoro mukana kudana mumwe munhu musaruraganda. VaKristu magamuchira kusimudzira chokwadi zvose. Hatigoni kutamba nhangemutange mutambo, tiri kuda kuchinja tsika–kwete kuita nani “nhema” tsika nemagariro kana “chena” tsika nemagariro, asi zvakabata nokukwidziridza tsika Judeo-Christian inokurudzira zvinhu zvakafanana rudo, runyararo, uye kukanganwirwa. VaKristu vanofanira kuona iri nyaya chiedza chokwadi, uye kwete kubatanidzwa muhondo kuchema uye muroyi kuvhima kuri kuitika izvozvi. Nyengeterera vose mhuri. Kristu Tinzwirei tsitsi zvose. More Mundangariro dzangu pamusoro rudzi & tsika pano: http://wp.me/p2C5Cy-VY I vaenzi uye zvaunofunga.
Scott Lee Sherwood • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:08 ndiri • pindura
Pamwe navo hama Kristu, Ndichati kutanga kutaura kuti ndinoziva ichi chinhu chisinganzwisisiki nyaya kuti kereke yose inoita kuti yakazoona yanyura mumadhaka dzose nguva pasina chisarudzo chaicho, kunyange dai “mhinduro” (Jesu) zvakarurama pedyo nesu. Saka Ndinoda kuratidza rudo rwaMwari wangu pakupindura Blog renyu, zvisinei zvandinodavira.
In kuverenga Blog renyu, kwenyu pfungwa sokuti anoratidza kuti GZ kunge nemhosva 2nd dhigirii umhondi nokungoti “rudzi profiled” TM. Izvi hazvisi sei nyaya hurongwa mabasa. Unogona kubvunza vatongi kukupa “mutsika” kukunda uye vozviidza panze kururamisira nokungoti mumwe mukomana haadi ruvara rweganda rako. Chokwadi muri kuti GZ haasi chena pasinei chii vezvenhau / NAACP / Celebrity Hollywood / uye Zvak Al angada kuti kutenda. Iye ane rakasangana urudzi pakati Hispanic / Latino dzinza uye akakurira mumhuri ine yetsika. He “profiled” TM nokuda burglaries kuti akanga achangobva zvakaitika chine gedhi vemunharaunda. Aine Hoodie pamusoro uye majini, anotevera munhu kubva shure, haugoni kudini rudzi / zvemadzinza vava. I Coach nhabvu uye vanopfeka Hoodies dzose nguva vari kuwa, uye imbwa kwangu yandihukura achiuya mumba mangu kana randaifanira Hoodie yangu nokuti haana kuziva ini. Haugoni kufamba munzvimbo dzakawanda nemabhangi kana zvikwereti mibatanidzwa akapfeka Hoodie. Vachatora mira uye kumbira kuti arubvise. Same anoenda nokuti heti uye Sunglasses dzakawanda mari nemasangano. vane “rudzi vafambi”? Chokwadika kwete, asi zviri “vafambi”, uye ichi hakuna kuipa. Isu ALL kuzviita mumwe dzose nguva. uye chokwadi, Ndave zvichiteverwa chitoro chibatiso pamberi, uye ndave ndakarega nemapurisa uye kusava pamberi, uye ose kurerukirwa chitoro pedyo Wokumusorosoro zvikoro, havangagamuchiri kurega vadzidzi kupinda Backpacks uye kushomeka nhamba vadzidzi vari chitoro. Ndinogara California uye guta ndinorarama riri yetsika. In dzakawanda zvakachengetwa vakaita rangu womunharaunda Safeway uye Walmart, kuchengeteka kana kurasikirwa zvikwata kudzivirira vane vashoma vakawanda vatema, zvechiAsia, Hispanic ethnicities. Kana ivo vakafungidzira munhu zvichida kuita mhosva, kana kukodzera kuva “profile”, kuri rusaruraganda kana vanotevera akavapotedza chitoro kana mumuchengete pavari, kana kunyange kuvamisa kuzobvunzurudzwa kana ivo vatema vose ..? Ndakaona zvichiitika, saka zviri mubvunzo pamutemo.
Zvinoratidzika kwandiri kuti vakawanda vanhu kuti vari kufara nezvakanga mutongo uye vari kupfuura Vocal nezvazvo vari ranting kuti zvimwe kodzero dzevanhu TM dzakanga akambokanganiswa. Muzuva yanhasi uye zera, pamwe kwakapararira mhosva uye kuzvidza upenyu hwevanhu, apo mashoko akafanana HUNOKUDZA uye KUVIMBIKA vakarasika vari gungwa “zviri mariri kwandiri” uye zvapararira kodzero mafungiro, dzakawanda vanhu ava kugona kukupai zvakakodzera tsanangudzo “kodzero dzeruzhinji”. Ivo zvinozadzisa shure jackwagons vakaita Rev Al Sharpton, uye NAACP nokubata mumagariro kusaziva pavanhu saRakeri Jeantel ndimuite posita mwana wavo rusaruraganda nyaya. kwazvo? Ndivo vanhu vakanonga kundorwa “kodzero dzeruzhinji” rusaruraganda kurwa nokuti nhema munharaunda? Ava ani uchida mumire? Ndapota. Ndinofunga Dr. Martin Luther King kuti misodzi kana akaona kuti sekasi vanhu vakaita izvi akashandura rusaruraganda uye kodzero dzevanhu kurwisana, mu. Chokwadi ndechokuti rusaruraganda haasi muvengi mukuru zvakare kuti America vatema. Kunyange pedyo. Black on Black mhosva, birthed ne chamazuva Kuparara mhuri, uye catalyzed achishandisa maitiro kuti inoti gov't chikwereti iwe chinhu, uye achaita kukutarisira, inzvimbo yakanaka kutanga, kana uchida yakarova guru hofori nhema vomunharaunda zviso. Zvichakadaro, pane vamwe kuti pfungwa mhinduro uye vari achitamburira dzimwe mindsets izvi. The vanhu pana National Center Pachena Policy Research vavo Project 21 Initiative muri vanhu kuti ndichagara swatanudza ndisingafari uye kutsigira zuva rose.
pakupedzisira, Rudo rwaKristu muchawana. It anoita. Uye zvichaitika mwoyo mumwe panguva.
Regai kuchaguma nokutaura kuti ndinoziva kuti rusaruraganda ariko uye zvinoitika zuva nezuva. Asi isu tiri huru kupfuura. rudzi ose kana urudzi akamborara benzi kuruma rusaruraganda wakasikwa naMwari kukunda uye kuva huru kupfuura ruvengo. Guru nhoroondo dema American uye varume nevakadzi zvikurukuru vakaita pavaida kwezvizvarwa Nokusaita rusaruraganda muvapedze. Vakasimuka pamusoro ezvinhu akakunda zvakadaro. Vangadai kurega uye vakashandisa rusaruraganda sechikonzero, asi havana. Kuti kumwechete uye simba naMwari Wemasimbaose aripo chero wedu kuti vawane kupinda pasinei upi noupi wedu chiso.
Thanks kuverenga, uye Mwari Bless You ..!!
alan_d • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:09 ndiri • pindura
rwendo, Ndinoonga vakadzidza, nonpartisan, nemaonero this post Christian. Just kunochitora kunze uko, Ndiri 26yr okuberekwa chena Grad mudzidzi kubva AL vaigara OK. zvisinei, pashure pokupedza kudzidza Auburn 4 makore apfuura, Ndakaenda kurarama D.R. Congo nokuti 2 makore. ndinobvuma, kukura, ndisati muKristu, Ndakanga zvikuru mumwe musaruraganda sezvo 85% of Suburban tsika yakandipoteredza yakanga. zvisinei, itsva-mwoyo kuti Kristu akandipa zvachinja kuti.
Pfungwa yacho iri, apo kurarama Congo, chaizvoizvo munhu wose kumativi kwandiri chero nguva yakanga mutema. Ndaifarira vanhu ndakararama kumativi, vakashanda kumativi, uye anenge munhu wose ndakasangana. zvisinei, kuti tsika nemagariro, paiva Ndichiri profiled vanhu. Majaya achifamba kumusika pasina chinhu kutengesa, kana kufarira chinhu, Semuyenzaniso. Homwe vangu akachenurwa kaviri, kunyange ndaikurumidza zvokuti anofarirwa vakomana uye vawane Nokia yangu chidhinha shure. wo, mapurisa + kazhinji + zvakaora. I profiled navo nguva dzose ndakaona munhu akapfeka yunifomu. Ndakanga ndarega, akasungwa, kana kunetswa kakawanda kupfuura ndinogona kuverenga nemapurisa / varwi, sezvo vakanga vakawanda veko kuti ndaiziva. Izvozvo zvinoita musaruraganda kwandiri kuti profile matombo iwayo vanhu nokuti zvakaitika kuti vatema? Saizvozvowo, sei musaruraganda kana nditamire mudzimai wangu mhiri muviri wangu kana kufamba apfuura murume chena kuti Ndinofunga anotarira fungidzira? Its chete pfungwa, uye ini pasi kuti hazvisi rusaruraganda. pfungwa yangu kuti vafambi chinhu dzinongoitika yevanhu mupfungwa uye * kunogona + musaruraganda, asi hazvisi nguva dzose.
Adolf • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:09 ndiri • pindura
Kana munhu asingadi kuva tsotsi, zvichida havafaniri kupfeka yunifomu. nhasi, zvinenge 70 Makore pashure pehondo yenyika 2. Waizofungei munhu akapfeka yevaNazi yunifomu? Chiri achipfekedza zvanaka?
gdoggydog05 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:10 ndiri • pindura
wo. Ndinofunga zviri musaruraganda. kuti mubayiro kana kuranga kunobva rudzi. uye musaruraganda kuti kana wako wenhau chena, akafanana neni….iwe kuti kudzingwa basa kana uchiti zvakaipa chinhu pamusoro rudzi. asi kana wako wenhau dema unogona kutaura kuti zvimwe vana chena anofanira kufa, kuti America kunzwisisa rusaruraganda (batanidzo pa pasi). tsvaka, iri pfungwa dzangu. Ndiri chete achitaura pamusoro pezvinhu izvi, nokuti ndinoda vaKristu kunzwisisa kuti nguva dzose pachava rudzi nyaya kumativi ose. Handifungi tinofanira kuenda chete nzira sezvo nyika uye chihuri pamusoro kwavari. nokuti pese paanotaura rusaruraganda pamusoro vechitema, unogona kuwana mamwe pamusoro mamwe marudzi. kunyange ini kunzwisisa kuti uranda aiva horrid chinhu uye yangu ancesters, zvechokwadi, haazombofi kunzwisisa chena hama dzangu vatema nehanzvadzi madzitateguru vakaoneka through.we havafaniri tigutse zvido chero rudzi kuedza “equalize” zvinhu. uchapupu ndowezano kuti mumwe Mwari wechokwadi aisazombofa izvi!!! Dai Mwari wemasimbaose ruoko dzidzo kwakavakirwa rudzi??? USAMBODEMBA USAMBODEMBA HAKUNA. Pamwe kwakavakirwa mari. Asi Mwari aisazombofa tsitsi kwakavakirwa rudzi. Israeri akasarudzwa, kwete nokuti chinhu kwavari, asi zvaMwari zvakanaka chete. My “shamwari dzakare” ramba ichi, uye chete kunowedzera pfungwa dzavo musaruraganda. “Handouts” uye “miviri mitemo” akatsamwisa navo. Zvino nharo kuti zvemarudzi-ose anoti “Ini chete pum kunzwisisa hondo” ndizvo chaizvo homwe kwandiri. panoti ndinogona chete kuenda kure nehama dzangu vatema… Handimbofi chaizvoizvo munin'ina wavo kunyange, chikonzero handisi kunzwisisa chii chacho kuva navo. Rinoti nezvakaitika munhu mutema tisawirirana, kupfuura Kristu runotibatanidza. Ndizvo zvandiri kuona izvi nyaya nemaune achiti. I Chokwadi ndinoziva zvazvinoreva kuva profiled. Ndaiva mwana kamwe. Tose nepa oma nguva. Ungasazviziva chii chacho kuva naamai nekenza, akafanana neni. Kana imi murege kuziva chii zvakanga zvakaita kuti akatumira kumusha kuvana zvakaipa Pandaiva 12 zera, vangosiyiwa yangu chena, garika, Suburban mhuri uye akasiyiwa kuti nei havana kundida. Ngatiregei kutanga kunyora zvibozwa pano. Izvi zvachose ane moyo akatsauka maonero kufanira kutarisa avo akasiyana zvakaitika. Ngatisanganei pamwe chete uye vafare kuti takapiwa nyasha kana isu zvaikodzera rufu.
Alex Ericsson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:11 ndiri • pindura
I HUNONYANYA mubvunzo kuti Trip anotsvaka achitsausa hama nehanzvadzi nokuda rudzi. Iye munhu mutema mukereke vakawanda chena iyo zvaainazvo kazhinji uye pasina kumbomira akaratidza kuti aitenda. Asi pane zvinhu wokuva dema America kuti nevamwe uye incongruent kwazvo nevamwe tsika zvakaitika!
saka NDAPOTA, Ndinokumbira kwamuri mose, kunzwisisa musiyano pakati tsitsi zvechokwadi uye hune tsitsi. Sezvatinofamba nehama dzedu nehanzvadzi Kristu, tichava nemikana mishoma kuti zano rinobva kunzvimbo urombo akatakurwa navanhu nekubvimirana asi tichange kazhinji kunzi kumurwere, basa rudo chinangwa. tsitsi. Ndipo tichiteerera nematambudziko vanhu dzakaona, haana kurerutsa kururama kwemashoko wake kutambura nokupa pakaunda-mienzaniso kwehwamanda ruzivo rwavo, uye kazhinji uchitarisira kuti zano redu, kunyange tishandire munhu, harizovi pakarepo mushonga kunyevenutsva kurwadziwa kwavo, chishingaidzo, kana kunyange hasha.
Zvisinei chero kutadza maonero pamusoro iyi kana rudzi, zvakawanda
isu mukereke (kunyanya. Via evanhu vezvenhau) Wakisi hwakajeka pazvinhu zvenyika asi anopedzisira
inorira shamwari dzaJobho hanya. Zvino ndiyo nguva apo vanhu vari kuvhiringidzwa uye akagumbuka chaizvo. Vanhu ZVOSE Mavara akatsamwira mugumisiro iyi. Vazhinji vavo tinofanira kushivirira uye kunyaradzwa zvechokwadi. Kwete hurukuro pamusoro pamutemo hurongwa kana “uori vezvenhau”, kwete hwemusi-uye-chinja mienzaniso, kana political anozvidza punditry. Kunongedzera kuti Jesu akaita kwamuri novunyoro.
Dinah Robinson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:11 ndiri • pindura
Pandaiva kasikana, pamusoro zvokutanga vakwegura, Ndakanga rudzi profiled mune raiva Eckerd Drug Store (zvino CVS). Handina kuziva panguva zera chii chaiitika kwandiri, asi ndaiziva somwana zvakanga zvisina kunaka. Ndakanga naamai vangu uye ndakanga ndakawana $20. Ndakafunga akanga akapfuma. Ndaida kuti vandotenga zvihwitsi uye zvimwe zvinhu zviri muchitoro. Asi mumwe kutengesa vanamabharani vakaona ini kufamba mukana woga uye yaaifungidzira kuti ndakanga kuenda kuba kana kuita chimwe chinhu chakaipa ndinofungidzira. Iye ini zvose akatevera vakakomberedza chitoro. It akanzwa kunetsa kuti mudzimai uyu anditevere. I akazowana amai vangu pamusoro mumwe mberi nokudzoka shure uye akamuudza handina sokuti kunotenga zvakare. Ndakamuudza patakabva muchitoro chii chakaitika uye akati vahosi kunge vakafunga ndakanga kuenda kuba. Zvakandifadza Zvinosuruvarisa kuti iye akafunga mumwe musikana muduku akatarira sembavha. Fast mberi kuva mukadzi akura uye chetezvo zvichiitika kwandiri somunhu mukuru mune akanaka chitoro. Ndakanga ungwaru kufunga kuti mhando chinhu hazvifaniri kuitika mazuva ano. asi zvinosuruvarisa, rusaruraganda haisi akafa. Hapana kusashivirirana kuti kusiyana nevamwe kana vanhu vari vokuAmerica kana vatama, ngochani kana kururamiswa, mafuta kana dzakaondoroka, vakadzidza kana pasi-vakadzidza, mupfumi kana murombo. Panzvimbo kupemberera kusiyana kwedu tiri chete “Kushivirira” imwe neimwe. Tose kutakura zvimwe zvisizvo uye ndinoziva pachangu ndinofanira kushanda kuda muvakidzani wangu ndinomuda ini. Ungasaedza kukwanisa kushandura munhu
rusaruro, asi iwe unogona kuchinja mafungiro ako pamusoro sei iwe kubata nevaya
“pre-mutongi” iwe uye sei paunopiwa nayo. Ndine mwanakomana uyo rasviba
uye Dominican. Ndinoda kuti vakure kuva kuremekedza tsika dzose kana
anosarudza azviti African American kana Hispanic kana vose. Richadzidziswa
kutaura Chirungu uye Spanish. Richadzidziswa nhoroondo zvetsika.
Uye Chikurukuru richadzidziswa kuda Mwari uye kuda vanhu. Ndinotenda inotanga kumba uye chii isu kurarama zvatinodzidza uye zvinosuwisa chii kunoratidzwa panze munyika yedu.
Troy Frasier • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:12 ndiri • pindura
ndine, Ndiri chena, uye ini vakawana zvimwechete zvose sezvinoita mwana uye sezvo mukuru…. Handizivi kuti muzviitiko avo vaiva rudzi chokuita. Saizvozvo, haha, kazhinji vanamabharani makanditevera kumativi sezvo mbudzana, kuyaruka, nezvimwewo. Kunyange iye zvino ndine chokwadi makamera nditeverei kana ndikafamba kupinda Wal-Mart, sezvo shamwari yangu anoshanda LP inoti ndinofamba sembavha zvinoita…. zvakadaro hazvo, . zvinoitika! :)
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:12 ndiri • pindura
I kutsigira Charles Barkley uye Bill Cosby iri imwe… vezvenhau akaridza nyaya inosuruvarisa mugomba National rioting nyangarara. Ndinovimba Zimmerman anoenderera mberi makuhwa kumatare musi NBC uye ABC.
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:12 ndiri • pindura
Iwe ziva kuti Charles Barkley uye Bill Cosby vasingabvumirani pamusoro nyaya akapoteredza nyaya kodzero?
akafanana yakafanana chaizvo nepfungwa, kuti matongero akanga akarurama
George Lewis • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:14 ndiri • pindura
mune zvose kukurukura tinofanira kuva mutemo pachayo rishaye. Ndapota kutsigira nesimba rangu @ moveon.org . A chikumbiro The Trayvon murayiro vachawanikwamo. TINOFANIRA okumbira RUBATSIRO WAKO Please wemasaini , tuma tenderedza , Retweet uye kumbira zvose shamwari dzako , mhuri uye kuonana kuita zvakafanana. Pasina kuchinja mutemo uyu akaipa izvi zvinogona kuitika zvakare.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:14 ndiri • pindura
unozvishandira kudzivirira? Mumire haina kunyange kushandiswa kudzivirira
Tia • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:15 ndiri • pindura
“Kupira uku zvekungofungira anosemesa uye venhema. Mwari akaita vanhu vose vari nomufananidzo wake pamwe ukoshi uye kukosha. Asi tose tinotadza uye vanokundikana kuratidza mufananidzo waMwari tinofanira. Mumwe nomumwe wedu anogona kutsauka pazvivi zvedu, kuvimba Kristu, uye kuitwa kodzero noMusiki wedu. Asi kusarurana mapiki uye anosarudza iyo vanhu chokwadi ava vanofanira kushandiswa. rusaruraganda inoti, "Ndine zvinokosha uye zvakanaka, uye vanhu vose ivavo vakaipa.” – Shoko Up Hama Lee!
Apo Umambo anotora nezvaro kure kusvikira basa systemic nokumanikidza American Christianity, kunyanya muchimiro White Supremacy, capitalism uye patriarchy, isu achaputsa kubva ngetani muusungwa. Ndivo ukuru uipi zvomudzimu dzakakwirira Shoko anotaura.
Mr. 116 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:15 ndiri • pindura
Mukadzi dema akapfura kunyevera kwepfuti mu Florida nokuti akanga kutya kuti murume wake okutuka kuti varwise naye. Munoziva zvakaitika, iye kugara mujeri nokuda 20 makore.
George Zimmerman muchadya yechiduku dema mbudzana Florida, iye akawanikwa mhosva?!? kwazvo?? rusaruraganda, zvamazvirokwazvo, nyaya iyi. Zvifunge.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:16 ndiri • pindura
akanga rusaruraganda kutariswa pano zvakare?
lewrites • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:16 ndiri • pindura
Ndiri chena / chizvarwa American, uye kunyange Native kwandiri chidukuduku ndivo, ganda rangu matauriro nerima chaizvo uye ndinotarisira kwazvo sezvinoita Native. Ndanga rusarura kubudikidza nevachena, kubudikidza vechitema, uye zvinenge rudzi ose unogona kufunga.
DC Talk rwiyo Colored People anopfupikisa pfungwa dzangu zvikuru zvakanaka:
Tiri vanhu mavara uye tinogara kusvibiswa nzvimbo
Tiri vanhu mavara uye akadanira isu rudzi rwevanhu
Tine nhoroondo zvizere zvikanganiso
Uye isu tiri vanhu mavara vanovimba Mutsvene nyasha.
Vezvenhau zvikuru mhosva. Asi predispositions edu, Zviito zvedu hwavanokonzera chii vezvenhau anodyisa kwatiri. Kana isu taitsvaka kare ruvara, kana tichida kuona matiri mitongo takapfuura vamwe zvakavakirwa nezviso kana zviito, kana tisina kunyange muchizviziva…tinogona kushanda kuputsa zvipingamupinyi izvi uye vasaora vezvenhau zvimwe zvokudya.
Joanette D. Clemons • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:17 ndiri • pindura
Iyi nyaya haisi chete pamusoro SYG mutemo uyu pamusoro vaizviita kudzivirira nharo. Mwana akanga ari Chaizvoizvo mhosva. Iyi nyaya zvakare sei murayiro anoona basa ari munhu, GZ, uyo vakazvirongedza pokukuvadza nzira. Where pachako basa anoita, pfungwa uye nokuzvidzora pakuchinja uku mamiriro ezvinhu? Apo Rachel Jenteal (kwete nechokwadi chiperengo) akanga vakabvunzurudzwa, akati “vabereki vako kukudzidzisa kuti kana munhu kufungira ari kutevera iwe, unofanira kumhanya. No mubereki anodzidzisa mwana wavo kumira kwavo. Kana vakaita, vangadai vasina mwana.” TM aiva mwana. Akatsanangurwa kuti mapurisa kubudikidza GZ somunhu kusvitsa kuyaruka. Izvi hazvisi fungidziro, ichi ndicho chokwadi. Trayvon akanga mwana kukura akura. Apo GZ akadana mapurisa, Akaita zvakarurama, kana akasarudza kuenda kundorwa kuda simba, akarasa kuzvidzora uye mamiriro ezvinhu zvakazoonekwa zvakaipa zvose. Aimbova Spiritual.: nguva zvingani takanyengetera akakumbira Mwari kuti atibatsire kubata zvinhu uye isu kuvimba nokunzwisisa kwedu pane kuteerera inzwi simba kwechokwadi kutiona kuburikidza. Trayvon haasi pano b / C GZ achisendamira kunzwisisa kwake. Akatora nyaya mumaoko ake pashure pokunge vapiwa zvakajeka uye zvipfupi mirayiridzo chii NOT kuita. Ndaida kuziva basa GZ kuti somuzvipiri munharaunda yokurinda mukuru kwaisanganisira. Ndakaona bhuku rino iri http://www.usaonwatch.org/assets/publications/0_NW_Manual_1210.pdf Tapota verenga peji 27 kuti Chapter 6. Uyu vakadarika miganhu ake uye zvakarurama KUNZE pachake basa muzvinetso akamhanya. Iye kuteerera mirayiridzo yakananga uye nemamiriro mwana vaitya, uyo aiva jaya uye mutambi. Iye dzikaruma kure kupfuura aigona kutsenga kana akabuda kunze kuda uye mirayiridzo simba. Ngatitii TM akanga ane ruzivo mhondi uyo akatora GZ kuti pfuti uye akamuuraya pachinzvimbo? Izvi zvinorwadza chiitiko akazarura musuo wandei kuti kukurukurwa. kusanganisira, asi kwete kungoitirwa, vafambi, pachako basa, The Mira Your Ground Law, chii tsanangudzo chaiyo kuzvida kudzivirira, uye kupfuura zvose apiwa Kukoshesa sei rudzi unofanira kuonekwa pfungwa vose. Zvose kuonekwa murima mwoyo yedu uye nepfungwa vachazopedzisira kuchiedza. Izvi zvinorwadza uye musoro cheni zvikanganiso chinorehwa kuunza mukuru nokunzwisisa, nhaurirano ruzivo. Iyi wakatuma kuvhunduka mafungu munyika. It haisi American nhoroondo nyaya, hazvisi Black nhoroondo nyaya, ndiwo munhu uye kodzero dzevanhu nyaya. Hapana anofanira kufa inobva pamusoro stereotypical zvaanonzwisisa uye kusava nokuzvidzora.
BQPhotography • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:18 ndiri • pindura
dude!! Ndinokutendai zvikuru nokuda vaiswe ichi!! I Hamubvumirwi chinhu chakafanana pamusoro wangu Facebook pamadziro. Ndinonzwa tinogona kufamba kubva rusaruraganda asi asi tinogona vachiri kutaura nezvazvo kugadzirisa dambudziko!! Kupikisana uye kuramba profile chero rudzi. Ini ndiri mutendi akasimba munaMwari uye nyika iyi inofanira kudzokera kuna Mwari. (2 Chronicles 7:14) Tinoda vanhu vakawanda dema semi uye ini, ndiani anogona tawedzera uye taura pamusoro rusaruraganda uye dzidzisa mumwe. Tinofanira kukunda vanhu ide rusaruraganda kukwira!! Thanks zvakare. Iniwo akabata kwemarudzi mashoko uye zviito nevamwe, asi handina kurega zvose kusvika kwandiri nokuti ndinoziva ani ndiri muna Kristu!! Ndatenda!!
maka • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:18 ndiri • pindura
pasina mubvunzo, pane vaya 'kwemarudzi’ vavariro nokuti zvavanoita – akanaka kana akaipa. Vamwe vanoti zvakaipisisa chete nokuda padanho rwe-melanin. Asi ini hameno kana pane chimwezve kuitika mumamiriro ezvinhu akafanana ichi kuti anoratidza zvakawanda kune tsika pakakoromoka kupfuura marudzi chete. Semuyenzaniso, kana Ndinoona mukadzi achifamba mumugwagwa mune pfupi chaizvo zvikabudura, yakaderera vendu tangi-pamusoro pamwe mazamu yakarembera panze, mijenya pamusoro make-vakakwira, gogo (kwete zvakanaka kufamba), etc., Ini vachafunga uyu mukadzi ari – kushandisa antiquated shoko – regedzeka. Izvi zvinondipa razero kodzero mumuviri kana kuti nokutukwa kuvata naye, kuti zvepabonde mashoko, nezvimwewo. Siyanisa kuti nemumwe mukadzi mukonde – mwero, asi anoyevedza bhurukwa, siketi, pfeka, nezvimwewo. – kodzero kubva Nyika’ magumo (kana tora Style yako) katarogu. Aigona kuvawo chifeve sezvo #1, asi ndinofunga kuti kashoma.
zvakafanana, kana Ndinoona mukomana mutema murume achiuya kwandiri akapfeka ari 'gangbanger’ – Nditamire parutivi uye vawane huta. Ndicho UNOGONA ari munharaunda youth mufundisi uye vaizobatsirana Evhangeri neni nokukurumidza pane kutaura shoko chinokuvadza. Asi chii pamwe 'banger mukonde? Asiwo, munhu mutema achifamba pasi mumugwagwa mune 1) Minda End mukonde 2) chinyakare African nguo 3) basa majini / majombo pamwe chena t-hembe… I pakarepo Vose pakutya kwangu mitigated.
pfungwa yangu kuti zvipfeko inzira nemagariro okuti. Uye kwete tsika vose vakaenzana. kana chii “chena” (kana chiedza mashava, tsvuku, yero) America anoona music videos, nhau manheru, newsweeklies, nezvimwewo. vechiduku mutema murume dambudziko ndiko varume vatema vechiduku vari upstanding nhengo munharaunda kusakara… kuti zvichaita kukurukurirana munhu dzinopesana shoko.
Fungidzira ini akapfeka t-shirt vaita mureza pamusoro payo uye kutarisira vatema chete kunzwisisa kuti handisi musaruraganda. I chete vanoda Confederate South.
zvakafanana, kupfeka sezvinoita chenhubu, usashamisika kana chauri kuvhiringidzwa chete.
Akapfeka 'Hoodie’ oga haana / havafaniri kuita izvi chokwadi. Asi vanhu vanofunga kuti vari zvipfeko / zvipfeko hazvirevi kutaura kana (kuipa) vanobvuma zvinoita, asi anoisa mutoro pamusoro mucherechedzi kuti nyama yose kusiyana panze ibenzi.
chokwadi • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:18 ndiri • pindura
James Lee • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:19 ndiri • pindura
High Profile nyaya yakaita sensationalize ichi uye Chinetso pakati chii isu faultfully kudana “ndudzi.”
Paaiva mukomana chena kubva Mafuro Detroit, pamwe ndingadai kupindura saizvozvo Zimmerman kunditevera, pasinei mabasa ndakanga kusvika.
Zimmermans mumudzimu ekushandiswa maonero ake pamusoro Lords raira kuti …”Musadzivisa munhu akaipa.” Zvimwe, nemazvo Trayvon Martin kuti murayiro uyu musingagoni uyewo. Sevadzidzi vaKristu, tinofanira kurangarira kuti kushamiswa kana nyika anoita “nyika.”
chombo zvatinogona pamusoro evanhu nokusaruramisira uye rudzi rinokamukana kuti kuomerera mirayiro Kristu.
Thabiti Anyabwile akapa nenguva shoko 2008 pamusoro “Vakatakura Image”. Zvinokosha kuva kuteerera – http://t4g.org/media/2010/04/bearing-the-image-identity-the-work-of-christ-and-the-church-session-ii/
Vazhinji vanhu vane mazita uye upenyu kuti vave akavakirwa kubvuma pamusoro pfungwa "rudzi." Tinofanira kuchinja kune zvakawanda romuBhaibheri dzidziso urudzi. Kutanga kwazvose, zvakakosha kutsanangura mashoko uye kushandisa zvakanaka, kunyanya "rudzi" maringe ne "urudzi." The Christian anofanira kunzwisisa kubatana murume muna Adhamu, pamwe naKristu uye kubatana mukereke.
ora • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:19 ndiri • pindura
Takaona ALL akanga ari kugamuchira kuguma rusaruraganda, zvimwe. Kana zvisiri, ticha. Munhu vamwe nhangemutange iri kuenda vasarudze nezvedu, kwakavakirwa sei tikatarisa kana inzwi.
Takaona zvose mhosva yokuita nayo, wo, kune vamwe diki dhigirii. Chero nguva ukaona munhu uye kuti kutongwa–kunyange kana zviri akaramba zvemukati–kwakavakirwa sei kuti munhu anotarira kana ruzha… ndicho rusaruro.
Antha REdNOTE • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:19 ndiri • pindura
The 911 opareta akati “Hatidi kuti vamutevere” Ndizvo zvakakwana kwandiri. Kutongwa kuti kumbova zvinodiwa uye Trayvon vangangodaro vakupe kutsvoda wake Baba (sezvinoonekwa mumifananidzo) kana Zimmerman akagara ake “garo” mumotokari UYE pafoni to’ ari cops akauya!!!
Louie • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:20 ndiri • pindura
zvakajeka, Ndinonyara kuti vamwe vanoongorora izvi vanozviti vaKristu, Ndaitosvika tariro kuti vamwe vavo havana. Ndinokutendai Trip zvikuru kuisa mwoyo yenyu Blog ichi, nepakati iwe muupenyu kuti hatizivi pamusoro kana irege kunzwisisa. Ndiri White, Male uye 24 makore uye ndine shamwari dzakawanda matema, rakafanana chaizvo okugumburisa, vaya profiled zvisizvo uye ndave pamberi kurwiswa izvi neshamwari dzangu, mu kugwinha, kunzwa vasingabatsiri. Ndinofunga vamwe vatsoropodzi vari kwazvo kunyatsodudzira Trip mashoko kana kushandisa pavo inorira pepuranga nokuda kwavo pachavo nedzematongerwe uye zvematongerwo enyika. Trip haana akati chinhu pamusoro Zimmerman kuva musaruraganda. Zimmerman akaita mutongo chakaipa jaya kuti arasikirwe noupenyu hwake, chokwadi yachinja imwe mhuri zvachose, Kanenge Zimmerman mupenyu uye anofema. Uye chiitiko ichi akaparirwa kushevedzera kuti mauto wose kuongorora vakanga vaine kwavakarerekera dzavo uye kutarisa mitemo vari tose kumukuvadza. Zvinondifadza anorwara kuti vanhu havagoni nyore kuona kuti mitemo akasika kudzivirira vamwe akafanana neni (pamwe unearned neropafadzo) regai anoshanda kune vaya vanoonekwa sezvo “zvimwe”. Vamwe vanotaurwa mutemo uye vachiti Zimmerman akanga kururamiswa kutevera Trayvon asi akanga vaakaruramisa mumaziso aMwari kutevera mumwe munhu nokuti akatarira fungidzira. Pakupedzisira ndinonyengetera Zimmerman anouya kuziva Kristu se ake pachake muponesi uye mudzokere chinosemesa sarudzo wake chinhu chakanaka kuti Mwari anogona kushandisa kuunza mamwe kuporesa. Hakuna chinhu chisingazogoneki Mwari.
Nathanial Poling • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:20 ndiri • pindura
Unoziva sei Zimmerman akanga asiri muKristu nechakare? Wanga tarisa muedzo kana kuteerera soundbites. Ndinofunga iwe kuti yakawanda kokutonga mashoko ari mumhanyi ichi pamusoro vanhu chiKristu. Ndinoziva vechidiki chena vave profiled uyewo nekuti vakanga nyora. Regai kuita zvekungofungira kuti ichi chaiva rudzi mhosva uye zvekungofungira nezvevamwe mwoyo. Zimmerman angadai vavariro dzakaipa asi hapana akatungamirira imomo kutongwa kana vanhu vakanzwa zvizere foni, kwete spliced ​​ndivo kuti vezvenhau akaridza kuti there munhu kwemarudzi nyaya. Zimmerman akatarisana vatongi uye mhosva pasi kuzvidzivirira. Pamwe vamwe vanhu vanofanira kutanga kubvunza mimhanzi kuti African America vateerere kuti pave mhirizhonga pamusoro runyararo. Martin angadai akadzokera kumba, pachinzvimbo akasarudza kuedza rikarova Zimmerman.
kuvhunduka • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:21 ndiri • pindura
makadii zvose. First uye farmost ndiri muKristu. Chepiri Ini ndiri mukadzi afirican-American. Ndakaverenga mhinduro pano uye havasi kushamisika ini. Ndiri vakavhunduka nechisimba munyika ino (nhema pamusoro matema, kwawo kune vechitema,utsotsi vanzwe vashoma evechiduku kune voruzhinji, voruzhinji vakananga minoriity vechiduku). Kukuudzai chokwadi ndinotya,uye ichi ndicho chikonzero……….kana isu somunhu vanhu Gloss pamusoro societal echitema rusaruraganda kwakaita tiri muguva mungozi achidzoka kwenzanga yedu kudzokera kuti pazviri muna okuma50. Uyezve, patinofunga kuti yechipiri kuti America kwasvika vamwe mamiriro ane rudzi vakasununguka pakuva tiri muguva ngozi chete kurwara wakatambudza rudzi 50 makore apfuura. Ndinofunga vanhu vanoda Gloss nayo pamusoro nokuti nyore pane kuzotosvorana nayo uye kunangana naro. Saka imi hurege kuva rudzi chinhu, nekuti iwe haazombovi kunzwa vakuru vako kurukura sei nezvokuzadziswa anoyeuchidza mazuva oujaya hwavo,kusangana zvinhu iwe uye ndaisazombogona kuzovewo
.Nokuti imi hurege kuva rudzi chinhu nokuti haumbofi murefu mukati muviri wako mukono mwana dema uye mushamiswe angazoraramazve kuona 21. Nokuti imi hurege kuva rudzi chinhu nokuti munhuwo Zvinoonekwa wenyu uye haazombofi kuonekwa sechinhu kutyisidzira. Kana ndaiva ivavo nzira hazvina rudzi chinhu kwandiri kana. mwoyo wangu anobuda kune vose vaya vanga noutsotsi nokuda mhirizhonga. I haazombobudiriri uye kumbobvira vakarerutsa mhirizhonga. zvisinei, uyewo haazombofi kufuratira hurongwa kuti haabvumiri kupfura mumwe kunobva nechitarisiko,kana zvichibvira zvikonzero vari panze usiku,. Handingatongokangamwi kufuratira hurongwa kuti achatora mari yangu unogamuchirwa,asi ini kana mwanakomana wangu haisi. Handimbofi kufuratira mamiriro ezvinhu sezvo vari. America haisi pakuva. Ndinonzwa migumisiro yokuva vashomanana America nezuva,uye kunyange kereke.
bergyman • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:22 ndiri • pindura
Ndiri muKristu zvakare. Ndinobvumirana kuti rusaruraganda kuchiripo. Chokwadi, zvichaita nguva iripo. Muvengi achava nechokwadi kuti. asi ichi “haumbofi kunzwisisa divi rwangu” posturing hazvirevi kubatsira. Tine idiots chena kuti kuchengeta rusaruraganda. Uye ndizvo zvavari: pata racists. Panewo idiots matema kuti kuchengeta mashoko kufanana nevechiduku kuti anokurudzira vafambi. Chinangwa inofanira kuva ose tose pakazvimba pamusoro idiots izvi uye vachiungana uye kugadzira kamura. Change rondedzero. Kana wechiduku vanhurume vatema… Wow. Handina pfungwa sei nzanga zvinopindura kuti, asi ndinoziva pane mhinduro ikoko. Ndinoziva Mwari ane zano uye yokupedza… uye haina nokupesana yakavakirwa sei munhu anotarira. Ake mhinduro iri pamusoro KUBATANA, rudo uye kudzorerwa.
kuvhunduka • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:22 ndiri • pindura
mhoro bergyman. Ndinoremekedza uye vanobvumirana, sezvaunoita. One chitsamba zvazvo- yangu maonero haisi “haumbofi kunzwisisa divi rwangu” asi ayo ane nekudeuka chiedza pamusoro nei ichi kwete pamusoro “divi rwangu” kana divi rako. Izvi pamusoro mu-chete mapatani nyika iyi ine asi kuna rectify.This ndiyo mijenya kuti America akapa vashoma. Vakuru reliving yaityisa zvakaitika pamwe Jim rarira. Vana kutya vachange nangananga nevamwe dzakaminama chimiro nyaya ino. Male vomumhuri kunetswa nokuda DWB '(kutyaira matema) Ndakashanda zvakaoma kwemakore akawanda kubatanidza vanhu uye vachiuya kwemarudzi tichiziva kuti chechi uye dzisiri kuchechi zvakafanana. Handisi kunzwisisa divi yangu .I'm vachiti kuriremekedza. NDICHAKUPA mberi basa rangu kujekesa nyaya,nekuti ndizvo MWARI aida kuti ndiite nekereke anochida. With kuti akati- setisiri kune zvirwere zvokusaruramisira ngazvive rwedzinza,mumagariro mari,maererano pamuviri kana pabonde trafficing,chakaipa kwazvo uyewo. Zvinonyaradzawo chinhu handikwanisi kuita. Pane chichiwedzera katsamba Ndaona ,reururo, uye kukanganwirwa pakati marudzi ari hombe pamwero vaKristu munamato zviitiko uye yakanga yakanaka nguva kuremekedzwa, reururo,ruregerero (kumativi ose) OHHH aiva kuti chinhu tarira zvakanga zvakafanana pslms 133:1-3 nenguva chaiyo. Feet makashambidzwa,Misodzi vakanga rakadeurwa, uye zvose mapato(nhema,chena,latino,uye Asian) akazvidemba pamberi paMwari nekupokana mumwe. Ndinoshuva kuti zuva apo “mukoma rudo vachasunga murume kumunhu” sezvo vanotaurwa guru rwiyo ode mufaro. Ndinoshanda uye kunyengetera hapana magumo kuona zvichiitika.
bergyman • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:23 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti mhinduro yako. Handina kureva kuti unenge uri kuita “Hamunzwisisi…” chinhu, Ini chete raireva Handidi mhinduro kuti ari mhinduro. Ndinonzwa kuti zvikuru apo Ndakaedza kubatana ari kukurukura maererano mamwe matambudziko aya uye sei isu somunhu vanhu anogona kuakunda. Ndinofunga pane kuva kunzwisisa uye negadziriso uye kuchinja kumativi ose. Ndinobvumirana nemi. Zvinonzi kuitika. Ini chete ruvengo sei refu zviri kutora vose kukuvadzwa / akarasikirwa noupenyu uye vakarasikirwa zvinogona … uye Ndinovenga kupesana. Tinokutenda mukurwa kurwa kwakanaka. Ndinovimba munoziva kuti handina kuedzesera kunzwisisa manzwiro, Ndiri kutarira kuwana nzira inotevera matanho… kupora, kupodzwa, kubatana.
kuvhunduka • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:23 ndiri • pindura
ehe. ndinonzwisisa uye tinoda imi muhondo . Ndine urombo kuti mumwe devalued kwekudyidzana kwenyu kukurukurirana uye / kana matambudziko aya. uye ini ruregerero pamusoro behalf.Would kwavo muchikanganwira tose uyo aibata avo vanoda kubatsira kuwana nzira nani sezvo kana vasingagari basa iri munyaya ino nokungoti ganda wake haana vatema. Ndinotenda isu mumwe tine chimwe chinhu kubatsira mumwe munhu ,zvakaitika kuti kune vakawana,rudo kugoveranwa,kukurudzirwa uye kuwadzana kuti vakanga (nhema,chena,yero,bhurawuni,yebhuruu nezvimwewo). ndaidavira kuti. Mwari vakuropafadzei bergyman…..rimwe zuva pslms 133:1-3 zvichaitika kana kwete pano panyika ,achine richauya.
Amen, Amen. Ndinokutendai nemashoko enyu omutsa. tenzi, mberi kuporeswa zvechokwadi rimwe zuva kuraira chikomborero.
Troy Frasier • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:25 ndiri • pindura
Hey Trip, Love Ya uye zvose, asi nokutendeka… unonakidza akafanana panyaya nhangemutange, une zvimwe kuvava. Ndine urombo ganda rako ruvara akakuitai kugamuchirwa kuguma zvimwe rusaruro. Ganda rangu ruvara akandikomba leaved pamusoro kugamuchira kuguma zvimwe rusarura kubva dema munharaunda, (kunyange handina kumbobvira tagged nemapurisa). Its chikamu upenyu, murume. Ini chete dai ndakanga rusarura kuti muchinjikwa, kwete nokuti ruvara rweganda wangu ezvinhu iwayo. zvinoitika, hazvina yakanaka, asi tine kuregerera avo vanoita izvozvo uye vachirumbidza Mwari baba rudo rwake uye kusiyana. Uye kwete kuva chinovava, murume. Regai kuenda pane zviitiko iwayo apfuura. Kungofanana haufaniri kubata vamwe zvisizvo, mukanganwire uye uzvisunungure kubva muedzo kunetswa paunenge vatongwe. Munhu wose achatongwa. Kana kwete ganda ruvara, nokuda muviri chimiro, nzvimbo, zera, nezvimwewo. Ndave kutongwa kasingaperi nokuti kubva Florida ari midwest. Uye nokuti muduku. nezvimwewo. Tichava kutongwa, Ya ndinoziva? Tinofanira kuregerera uye kuratidza rudo kune vaya vasingazivi. :) Mwari ropafadzai Ya, rwendo!
Nicole • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:26 ndiri • pindura
By paakataura kuti rusaruraganda ariko pamusoro vanhu vatema hakuna chakunodzikisira kuti vanhu vatema anogona sarura zvakare. Tiri kurarama munyika yawira uye zviito zvose izvi ndezvenhema. Kushanda kuvhura nhaurirano hazvirevi kuti unforgiveness aripo. (Mhoro, mudzimai Trip Lee hakusi vatema elnaz) zvisinei, mubhaibheri, rugare anoita pusa haana kuenzana. Pane VAZHINJI zvinoda muShoko raMwari kuva vanoshingaira pamusoro kusaruramisira uye udzvinyiriri pakati kwose. Tinofanira kuva vanoshingaira pamusoro gutsaruzhinji, Siyana pamwe pakupedzisira. chinangwa kuratidza kusiyana Jesu Kristu yakanaka munyika ino rawa.
gdoggydog05 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:26 ndiri • pindura
Wow. njere. ini mhosva, wo.
bergyman • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:27 ndiri • pindura
Tiri kukumbira vanhu kuti simba rinopfuura revanhu. Tose kushandisa mashoko (vamwe kwakavakirwa pachedu ezvinhu edu, vamwe pati chechitatu yakavimbika, uye vamwe pati retatu kuvimbika) kutiudza zvokuita zvimwe zvikamu veguta, uye kumativi vanhu kuti tarira imwe nzira. Tese Profile. The musikana tsvukuruka Lizzi pazasi angadaro aiva vanhu vanoona naye sezvo benzi kana nyore kwakavakirwa sei iye anotarira. zvakanaka? zvichida kwete. Iye ane sarudzo, iye anogona kana kuedza kunyengetedza vamwe blondes zvose uko kuita ngwara, kuchenjera havana kuchengeta mashoko kufanana nevechiduku KANA iye anogona chete edza uye kuita zvaaigona kuti irege chokuita “mhando”. kufembera My (uye ndaigona kuva kure) ari kuti muridzi chitoro inowanzobvunzwa akanga shoplifted nevanhu kuti vakatarira / akaita Dinah Robinson … zvakanaka? Kana. Asi muridzi chitoro anoita tisingafungi? Regai kutaura nenzira iyi… kana munhu #1 Runako / madhirezi / mabasa akafanana vanhu vakapara mhosva avo chitoro kana munharaunda dzavo. (Ndiri anoumba hypotheticals pano) Chinangwa nhamba dzinoti: 7 kupererwa ne 10 nguva apo zvadai, mhosva chaitwa. Ungati, zvakadaro hazvifaniri profile. asi panguva nguva ipi iri nhamba Munoti, Ndichiri kuenda kufunga zvakanaka munhu uyu. 9 kupererwa ne 10? Ko izvi 99/100? Ko izvi 999/1000? Zvakadini kana uine imwe mhuri Arab munharaunda yako uye Unomuona tichibvisa hwakawanda masaga fetiraiza kupinda garaji ake? Zvimwe chete anofarira ake uswa kuti zvechokwadi girini. Tiri vakafunga kuti nguva dzose zvokufungidzira zvakanakisisa mune vanhu?
My maonero pamusoro ichi ndechokuti tine rudzi yakakamurwa uye zvematongerwo enyika yakapatsanurwa uye yakapatsanurwa mune zvoupfumi nyika. Hatigoni chaizvoizvo kuita zvakawanda pamusoro dzezvoupfumi… nhoroondo dzose anotiudza kuti tine urombo. Asi zvematongerwo enyika uye rudzi tinogona kutaura “Aihwa”. Handina dambudziko nokuva muhomwe vanhu banding pamwe America nokuti zvido kana nekuti vachibva munyika iyoyo uye ivo kugovana tsika iyoyo nyika. Asi ndinofunga izvi ndozvinoitika kana tine boka vanhu vanenge vakaungana (Pamwe nemhaka kunze uye mukati zvinhu) nemhaka sei ivo vakatarisa kunze, Ndinofunga ticharamba tiine matambudziko kusvikira “vanhu vatema” zviripo kumativi ose guta, kuvhota mativi ose mukana zvematongerwo, kushanda maindasitiri ose akasiyana, regai zvinoda / kuwana chaiyo mubayiro / mitemo kuvhota, kuenda kukoreji nenguva prices, uye kuroorana vanhu havana kwakavakirwa rweganda. Vezvenhau anoda nyaya mupfungwa. Mapato vanoda nyaya mupfungwa (kuti atevere simba voter turnout). Dambudziko iri kuita isu kuvabvumira kuti kutamba… ichi hachisi US maringe NAVO nharo. Uyu “tinofanira kutamba vose”. Uyu “tinofanira kubvuma kuti pane idiots ikoko kuti vachafunga tiri ani vanofunga tiri, asi ndiri kuenda hanya nokuti ndinoziva zvandiri.”
Taive dema vokugara vana (7 uye 9 yrs yekare). The 7 Yr musikana yekare vakatiudza “Munhu wose anoziva kuti vanhu chena vanovenga vanhu vatema uye kuti vanhu vatema vanovenga vanhu chena.” Akandiita ndakasuruvara. Munhu akadzidzisa kuti mashoko. pa 7 yrs yekare, kuti vave chikamu chake wakagadzirwa. Tinofanira kurega kutevera vezvenhau / politic zvinotaurwa nevezvematongerwe uye edza kuvaka mabhiriji uye kwete kugumisa pamusoro vanhu uye kana vanhu kuti mhedziso nezvedu, tinofanira kurega izvozvo idonhe misana yedu nekuti vakabata zvigumbu chete kunowedzera kwemarudzi kamura uye tinoda vagadzirisane ichi kwakagadzirwa.
Rumplestiltskin • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:28 ndiri • pindura
A chaizvo zvikuru-mhosva kutongwa, uye kwete W / o chikonzero. Our chipo Kubata, ne “chero” Pachagara kusvibiswa redu pakuti kare. Ndaiva vabereki, kuti apparenty vaiva “ruvara bofu”, uye ichi Ndinoonga. Pandaiva nemakore anenge matatu, uye kutamba munzvimbo yangu neshamwari rimwe zuva ari sandbox, izvi ndizvo ndakaona – mumwe nemumwe, mubereki vaiuya, uye kuudza “uyai Johnny, tine kuenda” kana, “Suzie, nguva yokuti makopeeshuro yako”. Mumwe nemumwe, vose vakasiya, kunze chete. Handina kufunga chinhu nezvazvo kuti zuva, asi gare gare vamwe matatu kana mana makore, Ndakaziva chii chakaitika: kuti mukomana wokupedzisira muduku aiva mutema. Ndinokuudzai, pandakaziva chaizvo zvakaitika kuti zuva, Ndakashamisika, uye hasha – kuti mukomana kuti vamwe vana vakanga kuva “kudzivirirwa” kubva yaiva shamwari yangu. Handina kuziva chii “nhema” aiva. Still zvinoshamisa.
ikozvino, ndiri 71, uye akanga ane ukama chete-on-mumwe naJesu Kristu, nokuti 37 makore. KUTI, kupfuura kwokukurukurwa “rudzi” chaizvoizvo akasvinudza meso angu, regai nditsanangure – mubhuku VaEfeso, rinoti kuti Mwari, akaita vaJudha, uye nekuvahedheni, ONE MAN NEW. vanhu, ichi chinoreva here, Neniwo, chero bedzi tine kuti ukama naKristu. Kana isu vanozopinda KRISTU, isu “pfeka”, kana “kupinda” ari ONE MAN NEW. saka. KUNZE Kristu, tinogona kuisa chiito, tinogona kuedza kuva vakanaka, ita zvakarurama, nezvimwewo. Asi kubva dzinongoitika simba nguva dzose kupera, uye isu vachakundikana zvakare, chero nguva tiri “kunze kwaKristu”, kana kwete pasi simba Rake. nomusoro?
Kunze Kristu, Pane ZVACHOSE KUBATANA – zvimwe tingadai takava kuti, kare kare. saka, kupinda Kristu, apo Handichafaniri chena, Ndiri mukoma wako, uye ndine musana wako.
Mollie • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:28 ndiri • pindura
Ndinobvumirana kuti rusaruraganda ndiyo nyaya. Asi vachiti kuti chete kuzorwa African kuAmerica zvakaipa. Ndave profiled kakawanda zhinji muupenyu hwangu. Ndiri muduku girl.I chena vane tsvukuruka rakamonana bvudzi uye maziso ebhuruu uye kumaodzanyemba madudziro emazwi. Ndakarovererwa cuffed kubudikidza cops nekuti vakanga vachitsvaka fungira. Ndarota pfuti yakaitirwa kuti musoro wangu munhu vachida kundiuraya. Ndakadarika zvachose pasina. Ndakava neshamwari vatema regai kutaura neni nokuti ndiri chena uye “haagoni zvinogoneka kunzwisisa”. Tose tine matambudziko chete. Tose vanotarisana chokwadi kuti vanhu vashoma vari kuenda edza kuziva nesu vasati atitonge. murume wangu uye ndine vana vashanu kwedu uye ichangobva vakagamuchira vaviri vehama dzake uyo zvichiitika richasviba. Ndinogona kukutaurirai chokwadi iwe kuti sezvo sezvo tave kuchitoro semhuri pasina vanhu vatema makambozvifungawo chaisvika mutsa kwatiri kana zvechokwadi akabvuma kuti kusvikira isu kushandisa vakomana vaviri izvi zvikuru. Sezvo kana padanho pigmentation mune ganda ravo anovaita vakasiyana nesu. Tiri vakaenzana zvose hatizi? Zvino nei ichi vachiri chena Vs dema chinhu? Nei hadzisi nzanga yavanhu vose vachiungana uye kubvuma kuti pane zviri makirisito dambudziko mwoyo uye kwete dambudziko rudzi? Apo vasikana vangu vakure uye vanotanga kutsvaka varume vavo handidi basa kana kuti munhu mutema kana chichena kana Chinese. Ndichaita chete kukumbira zvinhu zviviri, Anonzwa mude Jehovha nomoyo mwoyo wake, uye anofanira Jesu mumoyo make. Kana mhinduro izvi zviviri izvi zviri hongu ipapo ndizive achava akanaka kuvasikana vangu. Ivo chete vachaenda vanakomana vangu kana vanotsvaga mudzimai. Kuti zvose panhangemutange nyaya iri ngozi pasinei divi chiri kuzviita. Ngatiregei chete hwokukurira uye kumutumidza chii….dambudziko mwoyo.
LolaMitche2011 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:28 ndiri • pindura
Kuva multi-kwemarudzi nemhuri I zvachose kunzwisisa maonero akasiyana siyana. Ndichati kuti “chena” America achangozvinetesa nyore kumbobvira kunzwisisa “mavara” mafungiro. Sei ivo? Vanhu acharatidza zvakawanda tsitsi nevanhu vanogona kunzwisisa. Blacks anogona zita 100 siyana zviitiko rusaruraganda muupenyu hwavo, apo nevachena ndichakubvunzaiwo zita 100 siyana ezvinhu uye justifications kuti sei vakanga vanotenda zvavanotenda. With zvakawanda nevachena dziwande mujeri kupfuura rudzi, uye zvimwe vatema chikamu akachenjera mujeri ipapo nevachena, zviri Mhosva pachena zvinogona kuitwa munhu. Tose chete kuona chii tinoda kuona. With kuti zviri kutaurwa, Ndaiti tose tinofanira chete kuedza kuita zvakanakisisa vemunharaunda yedu uye muvakweve vakakwira. Black vokuAmerica zvino vanofanira kuziva kuti havagoni kutarisira tsitsi nzeve kubva nevachena, nevachena vanofanira kuziva kuti kuti havazombofi kunzwisisa zvakaitika vanhu ruvara ichipfuurapo. Uye nokutendeseka kuti kukuvara.
Dave • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:29 ndiri • pindura
Lola, Ndinofunga kuti kushandisa “vatema” & “nevachena” sezvamakaita romukova iyi yakafara mashoko akadaro ari rudo vanokosha zvikuru. African America hadzisi muvengi kuvaRungu. KuvaRungu hazvisi muvengi African America. Vanhu vane zvitadzo mumwoyo yavo ndisina mhaka mumwe nomumwe. It anotamba pacharo ari pakati zvose zvakasiyana siyana vemarudzi nokuda kwokudada vanhu vanosarudza nyama kuti kuzvikudza kunze kuburikidza ganda ravo ruvara. I kuzviona pakati dzakavakidzana Asian muno Thailand uyewo. Zvakasiyana zvirokwazvo hakungoitwi African America & kuvaRungu. Ndirege nzira waita vakakuvadzwa kuwedzera kushaya rokuyananisa panyaya iyi. Change anogona zvechokwadi.
Kristu akafa kuti aponese vatadzi. Uye kuti ndipo shanduko rinotanga kana totaura izvi iwe kutaurwa. Vanhu muchizadzwa yavo yekare runovarwisa pamuchinjikwa & wakapiwa lenses zvitsva kuona nyika. Zvichaitika pamunhu nomunhu pavanenge zvavo nokuzvikudza, yakamanikana nemaonero yakazununguka achishandisa Kristu nzira yoUmambo.
Kristu vakuropafadzei, Lola.
KSStrong • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:29 ndiri • pindura
@ Gdoggydog05 akanyora "zvose zvangu dema vechiKristu
hama pfungwa Martin, uye regai kunyange kubvuma chokwadi kuti hazvina kuipa pakutanga kusarudza trajedy ichi sezvo kukosha avo mazana trajedys zvakafanana kuti kuitika zuva nezuva. "- Muri kuzvitutumadza kuti AA vaKristu
vanoona dambudziko iri pamusoro zvose vamwe. Chokwadi ndechokuti iyi yave iri nhau, uye saka, izvozvo Pachatova nyaya kukurukurirana kupfuura zvimwe zvinhu kuti vanhu vasingazivi. Muapostora Pauro akasarudza, pane imwe nguva, kusimbisa chivi naHerodhi (vachiroora mukadzi womukoma wake) pamusoro mumwe chivi zvose zvakanga zvichiitika panguva iyoyo. Iye akanzi Herodhi kunze.
Kunyange tichiziva kuti Pauro haana kuzeza kudana vanhu akabuda chivi chavo kana unyengeri, tinoverenga chete kakati naye anoshevedzera vamwe mazita. Chivi ichi? Aihwa, akadana Herodhi nokuda chinzvimbo chake uye nzvimbo. Akadana Peter kubva (kubudikidza
zita) nekuti somutungamiriri mukereke yokutanga. Harisi chivi kunongedzera iyi uye kurukura rusaruraganda. Iyi rwave kudzora chinzvimbo mune zvenhau, uye saka vanhu nezvazvo.
gdoggydog05 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:30 ndiri • pindura
wokwaEfremu urombo KS… Ndinofanira kunge Zvinotova pachena. Handisi kuzvitutumadza…. ndiri kutaura pamusoro dzose vaKristu matema kuti ndinoziva kana kuti kuverenga, nezvimwewo….. uye handina kureva kuti vari kurongwa kakawanda…. chii Ndaireva ichi: zvose zvakataurwa vaKristu vatema vakaita, Handina kumboona chero kushora vezvenhau kuti kuisa imwe nyaya pamusoro pedastool pahwaro rudzi…. urombo pamusoro. Handizivi kana chavanoita kana kwete. Ndinofunga nhau iri mhosva ichi uye ndiri kushamisika kuti hama dzangu vatema nehanzvadzi akataura nezvezvimwe zvikamu mhosva uye sokuti vaitsigira vezvenhau vari kuratidza kwavo, pane kuparadzana, kunyange kana chete namashoko avo.
Steve Burlew • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:30 ndiri • pindura
Ndatenda, rwendo. zvakakomba. Refu nguva kubvira tiri kunge pamwe chete kana yakadyidzana. Ndinovimba nemi uye neyenyuwo kuita zvakanaka.
Nyasha norugare ngazvive nemi, hanzvadzi konama.
Heather Mahnke Worrell • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:31 ndiri • pindura
ndiri 32 egore chena hadzi. Ndaingotaura kutsanangura nyaya Trayvon kuna dzangu 12 gore mwanasikana yekare. Ini akatsanangura sei Ndinonzwa pamusoro zvose. Ndakaverenga Blog renyu pamusoro. Ndinoremekedza iwe, uye neniwo vanofunga kuti nyaya iyi inoda kuti kukurukurwa. I kuzvitarisa akafanana muchato wangu, nenzira… Kana murume wangu uye ndine kunetsana, tinoshanda kunze kusvikira tine njere. Tiri vaviri vakaparadzana miviri, asi muchato tiri umwe (murume wangu), sezvo tose tiri kuisa muzvikwata, tichida kana kuti kwete. I kudzidzisa vana vangu kuti ruvara hazvina basa, hunhu ndiko chinokosha, asi zvakadaro ndiri chena, iwe nhema uye tinogona kuchinja kuti. Ichokwadi pamusoro isu, sezvakangoita izvozvi ndiri akapfeka dzvuku hembe uye kana zvichida vanhu vose vakapfeka tsvuku Shirts nezuva, tinogona kuti vakapfuura zvose izvi, kubatwa zvakaenzana ne mumwe, uye zvose uchanzi “dzvuku hembe vanhu”, asi izvi hazvina kuzoitika. Tose tinoda kusvika pakunzwisisa pamusoro mumwe akafanana muwanano yangu. Kusawirirana vanofanira wakaiswa, “Usaenda kunorara makatsamwa”. Marudzi edu zvave mukurwisana nokuda yakarebesa. Hatina kumbobvira chaizvoizvo asvika pakunzwisisa, kana vakadzidza kuremekedzana zvakazara… zvino hombodo edu Manzwiro kunge rova ​​dzavo kumanikidzwa zvatinorambidzwa uye tiri kuputika pamwe irrationality. Marudzi edu kumbogara kuroorana mumwe, saka kutaura. Ndiyo nguva kuroorwa… Iwe akatsanangura Blog yako sei zvawave mupfungwa paakapiwa muna Trayvon Martin Case. Kuti ichi ndicho nyaya iwe, baba vako, sekuru vako, kuti wanga rudzi profiled. Regai ndikuudzei kuti, somukadzi chena, Ndinobata mweni ose nokungwarira pasinei noruvara rweganda. I kukiya masuo angu, vakabatirira chikwama changu, uye vana tighter zvisinei ani ndikafamba kare mumugwagwa. Pane ngozi chena nebhinya, Serial vaurayi, nyeruso, nezvimwewo. mhosva zvichiitika kwese sezvinongoita mune mumwe rweganda pane… Ndinoda kubatsira vachinje mwoyo uye nepfungwa. Just nekuti mumwe profiled, hazvirevi kuti musaruraganda. Imhaka yokuti pane vanorwara zvakaipa zvikara zvose ruvara uye tinofanira kungwarira. saka, kana taigara mune mufaro munyika dzakachengetedzeka apo munhu wose aiva nomutsa uye norudo, tingadai tisina kunetseka ndinofungidzira, asi ichi hachisi Heaven. Mwari vakukomborere, T.L. Rudo uye Rugare kwamuri.
Christopher Zavala • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:31 ndiri • pindura
Ndinofunga yose Zimmerman / Martin chinhu wakandizivisa kuti rakanaka nyore kwandiri kuti kutonga uye vanofunga kuti vamwe vanhu vari chete “kuridza nhangemutange kadhi.”
Asi ini vanoremekedza Trip. Uye ndinoda kutora mashoko ake kuti mwoyo uye edza tsitsi pamwe kumaonero uye zvakaitika nevamwe. Ndinonamata kuti Mwari kuchawedzera wangu maonero uye yangu tsitsi. Uye ndinonamata kuti simba Gospel achabatanidza Chechi uye kubatsira tose kuwana mazita edu muna Kristu uye kwete zvine kana kirasi kana nyika…
TJ • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:32 ndiri • pindura
Uri kuzvitutumadza nayo kwaibva ruvara. Wanga kanganwa pakanga varume vaduku matema ichipaza mudzimba apo zimm akararama? Izvi aiva nechokuita ruvara chete nokuda kwayo.
Laura Merrone • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:32 ndiri • pindura
Ehe, anoita mberi uye vawane zvose izvi shure kwedu. Chero zvakaitika kuti zuva, unogona kukangamwira uye kukanganwa? zvatinogona zvose “rudo muvengi wedu” muKristu ani kuti ave? tinogona kutaura nokutendeseka “kutsiva ndezvaJehovha” kwete zvedu? Ini ndiri mukadzi chena asi kunge kuburikidza zvimwe zviitiko zvakaipa ini asi ndine yakawanikwa pamusoro payo nokukanganwira mapato ose vanobatanidzwa. rudzi rwedu anoda achiporesa haana zvakawanda misodzi. Patinoramba kuregerera, ari nani tichava uye rusaruraganda manzwiro achasvava. ikozvino, kana chete Al Sharpton uye nhau ucharega kurera zvinhu zvose izvi uye kuvhura maronda, tichava zvose zvakanaka…
Sophia • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:32 ndiri • pindura
Wow! Zvinonzi saka Zvinozorodza kunzwa maonero Umambo nyaya iyi. We kuti wakaputirwa saka kumusoro nharo mumwe, kuti tinokanganwa kubvunza Mwari chii Anofunga. Tinokanganwa kuti mhinduro vatova shoko rake. Tinokanganwa kuti tinofanira kuvimba nomunhu uye chinhu asi iye. pakupedzisira, tinokanganwa kuti vaya vanotsvaka Him, vachava vaya kuwana chokwadi.
Rusaruraganda Zvechokwadi nyaya munyika ino. Ndechimwe chinhu kuti hatigoni kumhanya kubva, asi kuti tinofanira kusangana uye kuchinja. Tinofanira kuziva kuti tinogona kuchinja pasina Jesu Kristu. Rusaruraganda chinhu chaicho kuti zvinoratidzwa redu kururamisira mugadziriro, mu sei tinofunga pamusoro nemumwe, uye sei isu kugarisana. Kusvikira ruvengo rinobviswa yedu, rusaruraganda icharamba vaverevedze kupinda zvatinosarudza. Kare kuchava kare, kana haichawaniki aripo ramangwana redu. kusvikira panguva iyoyo, hatitombofaniri mberi.
Karla nemikonachando • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:32 ndiri • pindura
Ndine hurombo, I akatsanangura kuti zvakaipa! We vakafirwa sekubata, asi kwete nokuda kwerudzi!
Karla nemikonachando • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:33 ndiri • pindura
Amen Trip. Ndiri hafu weColombia, hafu Chirungu, zviri nyore kuitira kuti ini sezvandiri chena, Ndaiva shamwari kwenguva yakati iye akanga chiNazi natzi kubva Ireland. Haana kuziva ndakanga hafu weColombia kwenguva refu. Pandakaona zvaaitenda, Ndakamuudza ndakanga hafu weColombia, akaramba kutenda kwandiri. Akanga ndaiva ganda zvasviba, angadai asina kuva shamwari yangu pakutanga. Akaramba shamwari neni. Ndinovimba Mwari akashandisa izvi kuchinja maonero ake, hatina kubvira akarasika kubatwa kuburikidza zuva nezuva muupenyu, asi kwete nekuda ganda ruvara. Handikwanisi kufungidzira kurwadza uye kunokuvadza ndiye ngairambe ichizotongwa ruvara rweganda rako. Mwanakomana wangu anoda 116. Ndiye chete ina uye asina pfungwa rusaruraganda asi. Tinokutendai zvinobva pasi nomwoyo wangu nokuti basa zvikuru yokutevedzera nevanakomana vangu vaviri. Kana toreva angu mana gore Tsaru iri hanya, Vanhu vanotarisa akafanana rappers vanoda Jesu uye ndokuchengetwa :)
Kay • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:02 pm • pindura
Pandairamba uye kunzwa pamusoro Trayvon Martin nyaya. Pandaiwedzera kuziva kuti vakawanda havagoni kutarira kubvira sezvazviri / ndeechokwadi nemaonero. Tinowanzofunga kutarisa nyaya idzi kuburikidza nokushapira izvo kuti anotakura mukwende kubva pachake kare. Ndinotaura somukadzi ane-sekuru huru yaiva munyika zvisiri pamutemo kubva kuMexico, asi yakarambwa naKristu pakubvuma The Truth, kwete chokwadi sezvo “ini” kuzviona. Kristu anokumbira kuti taikamura kuzivikanwa kwedu kusanganisira urudzi yedu, pabonde, kwemasangano chavanopinda, nezvimwewo (Galatians 3:28), kuti vaone nyika yedu kubudikidza izvo Kristu…iyo rinosanganisa chokwadi zvose.
Trayvon Martin, maererano shamwari yake Rachel Jeantel rudzi profiled George Zimmerman vachimutuka “Creepy munhu ** cracke,.” uye akabva utsinye ndokumukira GZ. nzwisisa, Ndiri hapana nzira pakudzivirira Zimmerman nokuti akatora mutemo mumaoko ake, izvo yakaguma rufu Martin. dambudziko rangu iyi, kwave vanopfuura inowanzotaurwa rakapiwa vashoma kuti musaruraganda mashoko uye nemaitiro. The chokwadi hazvisi kuti varume vaiva kunze mutsetse mumuitiro kwavo kune mumwe nomumwe, asi TM awana kupfuure nokuti ndiye munhu ruvara. Ndine urombo asi Mwari haadi kukudza kuti mafungiro, nokuti munhu yakakoswa uye rwakatsauka.
Varume vaiva zvakafanana zvakaipa sei mhinduro kune mumwe, asi isu hanya ALL chokwadi. Tichangobva hanya chokwadi kuti zvakanaka kutsigira nzira tinoda kufunga.
Ndiri kuwana rusaruraganda idambudziko chairo Mutsika dzedu, asi chokwadi ndechokuti hazvisi chete dambudziko chena, ndizvo sezvinoita dzakakurumbira vanhu ruvara uyewo. rusaruraganda, hahungatongogumi bedzi tiri kunetseka chete yedu “pachako” vanhu. Ndinonyatsotenda ndiro shoko Martin Luther King Jr. kuparidzwa, risati nekusvibisa zita nokuda likes ose Al Sharpton & Jesse Jackson. Kubatana uye kubatana zvinogona chete kuitika kana varume nevakadzi ona zvechokwadi kuburikidza izvo Kristu, nekuti sezvo Galatians 3:28 Inotaurawo tiri ALL ONE “IN” Kristu. Ini pachangu tenda chero nguva isu akasarudza kuona isu kunze kuti urongwa, kupfuura isu kana vachiziva kana kuti vasingazivi tote ematongerwo uye vanokamura. Bottom mutsetse vaKristu, rusaruraganda chingamisa nemi, chero iwe zvechokwadi kugamuchira maonero aKristu. zvimwe, muri vakasara vane tuzvikonzero chokwadi nhema kuti anoramba kuzomisa zvipingamupinyi pakati pako nevamwe.
Tinofanira kuzvibvunza kuita kuda Chokwadi, kana tiri isu kufarira kuona kuburikidza dzedu zvisiri izvo, apo chokwadi ihama, uye unogamuchirwa chete kana zvinoenderana framework yedu?
LaRone • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 4:35 ndiri • pindura
Chii ini haafari kupfuura chinhu chiri sei kuverenga “zvimwe” mhinduro Posting iri Website anoshamisa, I zvakaoma kuona musiyano pakati pano, YouTube kana mumwe nzvimbo apo vanhu chete vanoda nharo dzavo pfungwa uye omudzinga nyasha uye rugare. Still, Mashoko nani zvikuru pane dzose. Chii Trip aiedza kutaura sokuti yakawanikwa akarasika mune dzakawanda mhinduro.
Akatosvika kuurayiwa Trayvon, chete cherechedzai kuti ayo anenge kumbobvira munhu ruvara, kunyanya rutema, kuti anouya kudzivirira Zimmerman. ikozvino, zvose haana kuita rudzi, asi zvinhu hazvifaniri kudaro nyore ikasateererwa. The Black Zvakaitika mu America ari zvakaonekwa sezvisina basa saka. Sei? Vanofanira Blacks chete kuwana pamusoro kuti madzitateguru avo vaiva pfuma varume nevakadzi munyika ino? Ko kuti hurumende anoparadzirwa chaizvoizvo kundodana rusaruro pavo kukanganwika? Havafaniri kukanganwa kuti Constitution chaizvo akataura kuti vanongova 3/5 murume? Of wakaenzana kukosha, vanofanira vanhu vasiri vanhu ruvara here kuita vasingambozivi izvi chete zvenhau American sokunge havasi vachiri mugadziriro pakudzvinyirirwa (kwete chete vafambi) kuti zvakananga pave nhema munharaunda uye mamwe mapoka maduku agamuchirwe? Zviri nyore chaizvo kuudza vanhu kuti pamusoro payo kana kuratidza Black kubudirira achiedza kurerutsa munhangemutange ukama ichi kare musaruraganda nyika. Asi kana uri kumupi kuti rusaruraganda (kunyange kana asingazivi) uye hauna kukanganisa nayo isakarurama, iwe vanongoerekana kuva nemaonero akasiyana uye dzimwe nguva kunyange kuzvidzivirira panyaya nezvemarudzi. Ndinokutendai Ishe kuti Kristu kunobatanidza vanhu ALL. asi zvakadaro, Machechi kuramba zvikuru zvakaparadzaniswa nzvimbo America. Ndinokutendai mose kuti kuverenga uye zvose kuva Blessed.
thefollower • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 9:51 ndiri • pindura
Ndakaverenga kuburikidza ichi rose chinhu mhinduro, nharo, tsitsi mashoko. It zvose zvinoshamisa ini njere dzako pachako ruzivo pamusoro zvose izvi. Kufanana pakutanga Trip akati regai chinyarara nezvazvo, zvisinei, Ndine chokwadi zvikuru haana kwaireva nharo.
Ndiri 18 egore chena musikana, shamwari yangu yepamwoyo chiri 18 gore musikana dema okuberekwa, Handina hama vatema, chechi yangu chose chena, Ndine shamwari zhinji matema, uye ini aishanda kumusasa vana varombo apo vanopfuura hafu campers nhema….Ndaona nzira imi mose kuisa vamwe chokwadi pamusoro hwako kuti vanhu vanzwisise zviri nani saka iwayo mashoma zvine chokuita neupenyu hwangu…Ndakadzidza pamusoro kwemarudzi nyaya uye ungave ini ayo kunyange akaita kundipengesa zvakakwana kuputsa ruoko rwangu kubva punching zvinhu apo kunzwa pamusoro anofunga vamwe vanhu vaenda kuburikidza. ayo kunaka kuwana unopenga pamusoro zvinhu zvakafanana umhondi, rusaruraganda, nhema, uye unyengeri, asi zviri zvechokwadi NOT kunaka kugarisana pamwe kusaremekedza uye 'ndinoziva nani’ Mafungiro Ndakaona pamusoro pano. Ndirege kuziva zvakawanda yose pamusoro nyika uye ose mukurwisana kwayo asi ndinoziva zvinhu zvishoma. Ndinoziva kuti pakutanga Mwari zvose zvakasikwa murume zvose zvakaenzana uye seshamwari vevaya kubatwa rusaruraganda tinogona uye tinofanira kuramba akavamutsira. Neniwo ndinoziva kuti Mwari ndiye Mutongi Akarurama uye vazhinji imi akapikisa pano akati makanga dzechiKristu…unonyadzisa… iyi wakamutsira kupesana kwakadaro uye kwete kwete pakati chena / dema / Hispanic vanhu pakati ose munhu anofunga / iye anoziva zviri nani kupfuura munhu wose haribvumirani navo. Tiri vana vaMwari, chete anonyatsoziva zvakaitika usiku Treyvon akaurayiwa, saka vari isu nharo ndiani zvakanaka kana zvakaipa?
John 8:7 Zvino vakati vachiramba vachimubvunza, akatwasuka, uye akati kwavari, “Usina chivi pakati penyu, ngaatange kukanda ibwe kwaari.”
Handisi kunzwa kukuudza pfungwa yangu nyaya uye handisi kunzwa kutonga iwe. Ndakanzwa ndichida kukuyeuchidzai kuti zvakanaka kana zvakaipa tikanzi kuda vanhu uye kuti kurega kudada udyire pamusoro kuhwinha nharo kuti harisi redu kukunda. John 8:7 vakauya muchibata mukati vokutanga gumi Mashoko akagarako kusvikira pakuguma. Kana uri kuenda nharo kuzviita nenzira yorudo kana, pano ari shamisa pfungwa, kana uchiziva kuti haukwanisi nharo nenzira achiri tinovaremekedza MUSAENDA NHARO! Hazvisi kwatiri mhosva kana kusunungura munhu uye zvakajeka ayo ufuza kuita zviri. Ndinokutendai nokuti kutsigira uye kuudzawo maonero enyu! Kufanana ndakati ndine chokwadi kuti imi muri mose vakangwara uye zvinonakidza vanhu asi kana tisinganeti kuratidza rudo rwaMwari kunyange kuburikidza yedu pfungwa sei munyika kuti vanhu vafunge chiKristu kunokosha kana tisina kuita vakasiyana vamwe nyika?
izvozvo • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 11:31 ndiri • pindura
Tiri vatendi, Vatakuri mufananidzo kwaIshe wedu Jesu Kristu, vanhu vanonzwisisa kuti isu uye vanhu vose vakaipa, mutadzi, vakaregererwa chete nenyasha dzaMwari kuburikidza nokutenda muna Jesu Kristu uyo ​​akatora kutsamwa Baba, nokuda kwezvivi zvedu, pamuchinjikwa nokuda kwedu. Ko isu tine pasina chokwadi? The CHOKWADI inofanira kuva chii anodzora nhaurirano iri, kwete pfungwa. Nhoroondo yedu inotiudza uye rinopa mhinduro kana tichida kuva vakatendeseka.
Handidi kunyange kupa kwemarudzi kuzivikanwa yangu. Nokuti hachibatsiri hurukuro iyi. Ini ndiri munhu anoda Jehovha, uye munhu aidzidza mutemo, kururamisira, evanhu, uye mutemo ånd.
Tarisa zvinhu uye Stats. The American Justice kwava kure colorblind. Iye zvakaipa reeks kwezvivi kudzvinyirira, kusarura, uye zvakaipa. Classism anongova zvikuru mhosva nayo sezvo urudzi ndihwo. Asi kutaura rusaruraganda hakuwaniki, kana haana pakuchinja zvaitika iyi, Kukanganisa. Inguva pfungwa kuti anosarudza kufuratira zvachose nhoroondo yedu kururamisira wemuTesitamende nyasha chii vangada kuva yechokwadi.
Rusaruraganda zviripo. Ibenyu uye tsime uye tichishingaira.
Zvinofadza, tinoshumira Mwari anoziva zvose. Ndiani simba rokuporesa avo achaita nekumuita. Ndiani kutendeka kuporesa kuvava uye pfundepfunde. Uye ndiani akatipa simba kuburikidza nemunamato uye chiito.
Mudzidzi vana venyu chokwadi. Chokwadi ndechokuti rudzi yavo ichava chikamu kwavo nokuzivikanwa, (uye ona kuti vamwe vanhu vanoona navo) chero yavanogara.
Rumbidzo kuna Mwari anotarisa kwete pane chii munhu anoita.
PastorNorm • Nyamavhuvhu 24, 2013 pa 10:35 pm • pindura
The Ndinotenda kuti Mwari anoda kuti tiite chete chiitiko ichi uye navose nevamwe ndivo tikaramba kunzwa pamusoro chinhu ndiko Trip akati. Namatira zvose mapato zvinobatanidzwa kuti kana vaponeswe kubva zvaitika kana vawane zvakanaka kana vari vaKristu. Chii vose ndakarovha ndechokuti Mwari Wemasimbaose akatumidza nhamba Trayvon nokuda chero chikonzero Akanga. HAPANA chaizochinja kuti ihwohwo. Mwari akati, “Trayvon, zviri pamusoro penyu” sezvakangoita zvaakaitira Tupac nevamwe vazhinji. KANA Trayvon akaponeswa, rukudzo kuna Mwari iye zvino Jesu. Kana zvisiri, zvinosiririsa ari muhero. yeuka, Mup. 12:13 ” Tinzwe mhedziso yose nyaya: kutya Mwari, nokuchengeta mirairo yake: nokuti ichi ndicho basa rose munhu.
muchneededmoderator • Gunyana 24, 2013 pa 5:04 pm • pindura
Ndapinda website iyi, verenga Blogs siyana ndokuisa uye akakurudzirwa nokuda siyana namagwatidziro kusvikira ndasvika iyeyu. Mashoko shinda dzakatevera pazasi akanga zvose zvinovhiringidza uye mwoyo dzinoshungurudza. Pane kuverenga wakadzikama, murwere, akachenjera uye Mwari hwakavakirwa mhinduro, Ini pakarepo ndakazviwana achivharwa munhu manyemwe kuti urudzi uye kuvenga. Uye zvose izvi nokuda vakafunga vaKristu avo vanofunga kuti zvakakodzera kuudza mumwe ndiani kana asiri vaKristu uye kana minyengetero yavo ruchasveerera nzeve Mwari kana sezvo Marvin akariisa: “…Minyengetero yako kungangotadza kuti rapfuura siringi yenyu.” Vazhinji munoti kakawanda kuti hamusi pasi kurwisa uye kuda kugumbura munhu asina kuita, kuti iwe kungorega uine pfungwa dzako uye kuti hungu, vane simba. naka, isu tose uine pfungwa dzedu uye isu tose tinonzwa zvakasimba pane dzimwe nyaya kana tinoona vamwe vanotenderana. Ndizvo kodzero uye rusununguko tine sezvo vokuAmerica kunakidzwa uye ndinovimbawo kuti zviri kumbobvira yatorwa kwatiri. Asi kuti nguva dzose bash neimwe hama kana hanzvadzi muna Kristu uye kuparidza mumwe sokunge imi pachenyu munoziva zvakanakisisa unyengeri wakachena. Isu sevaKristu tinofanira kuziva zviri nani pane munhu kuti tiri inongova dzevanhu, tinokanganisa, tinoita vanozvikudza kuzvikudza, isu vakapofumadzwa dzimwe nyaya nokungoita chivi chedu uye pasinei nokuti tinoedza, nezvaro iwayo haazomboregi nokuti tiri vaurawa, mutadzi, vanhu. Hazvina kuti chikonzero kuti Mwari ndiye mutongi wedu. Hakusi yedu pfungwa inokosha, asi naMwari uye Mwari oga. Kuita kune mumwe saka ruvengo uye asi kudana pachenyu “hama” ndiyo pathetic panguva yakanakisisa.
Marvin, kuva akatendeseka ndaifanira kurega kuverenga pamusoro hafu nzira pasi nembiru nokungoti ndaisagona nomudumbu. nzira iwe vakaramba kubata kwenyu “Hama nehanzvadzi” yose apo nokunamatira pfuti yako, kungoramba zvomoto uye ipapo dzichitaura kuti iwe havana kufara. Verenga pachako mapikicha, changamire. Kana Ndinobvumirana nemi kana kwete hazvina basa, Chinhu chinokosha chete ndiko sei iwe kurapa hama yako. Verenga kuburikidza nembiru, makanga nokure (Kanenge kusvikira ndakarega kuverenga panenge pasi) zvikuru akadaro munhu ari shinda iyi. Iwe udza vamwe havana kodzero kukuudzai kunyengetera uye ipapo anoratidza kuti Mwari haadi kunyange minyengetero yavo. Vari kuti vafunge izvozvo? Hamusi Mwari. Ngaaburuke chako choumambo uye zvadaro taura kuhama dzako nerudo pachinzvimbo kusashivirira uye hasha.
Rusaruro ndakashata uye ini kuzviona kwose kwose uye nguva dzose. Ndinovenga kuti dzakawanda zvikonzero zvakasiyana uye dzakawanda dzakasiyana siyana. Asi pachange pasina kuporeswa chirwere ichi kusvikira kumativi ose vanoziva kuti hapana kusarurana pasinei ruvara ganda rako UYE kuti havasi vanhu vose vanovenga vamwe vanhu nokungoti ganda ravo kana tsika yavo zvakasiyana yavo. SomuKristu Ndiri zvikuru kuona sei rusaruraganda akaita kuti pave nehama dzangu nehanzvadzi. Ndiri ndakasuruvara kuti tinofanira kuona “musaruraganda” kumativi ose pamakona uye vanofunga kuti vanhu vari musaruraganda nokuti ganda ravo riri chena. Tinofanira kuona vamwe vaKristu vane akawanda uye tsika. Regai achidanidzira “musaruraganda” pane imwe uye kungotaura “hanzvadzi konama”. Ndinoona zvakawanda rusaruraganda kuva dambudziko rimwe zuva nokungoti chete divi kana mamwe unodanidzira “musaruraganda” vasingazivi munhu Ivo nezvayo. Kana ukaona hama kana hanzvadzi achiita musaruraganda nenzira iyoyo unotofanira kugadzirisa uye taura kuti munhu, voga. Asi achingochema mhumhi kana pasina Bere.
Kudanana sezvo Kristu akada kereke. Ndizvo zvose tinofanira kuyeuka kana toreva nezvokubata mumwe.
Taurai: Kwete Nokuona, Kwete Comfort: Encouragements Yevaya kusanganisa Churches : The Front Porch